I-United Arab Emirates - Isikhokelo seeNgxelo | I-Dubai kunye ne-Abu Dhabi
I-United Arab Emirates-Isikhokelo seeNgcebiso
Imisebenzi e-Bayt-No.1 Umsebenzi we-portal kwi-UAE
Sebenza eDubai ngeZibonda-umvuzo, izibonelelo [+ amaxabiso, imali]
E papashwe ngu Inkampani yeSixeko sase Dubai at Septemba 27, 2019
I-United Arab Emirates -Isikhokelo ngeeNgcebiso. I-Abu Dhabi yeyona inkulu kuzo zonke i-Emirates ezisixhenxe ezinendawo ye-67,340 yeekhilomitha, olingana ne-86.7 ipesenti yommandla weli lizwe, ngaphandle kwiziqithi. Inendawo engaselunxwemeni enabela ngaphezu kweekhilomitha ze-400 kwaye yahlulwe ngeenjongo zolawulo kwiingingqi ezintathu ezikhulu.
Umda wokuqala ujikeleza isixeko sase-Abu Dhabi esisixeko esilikomkhulu kunye ne-federal capital. USheikh Zwed, uMongameli we UAE uhlala apha. Izakhiwo zepalamente apho ihlangana khona iKhabhinethi yomdibaniso, uninzi loorhulumente bamaziko kunye namaziko, abameli bamanye amazwe, amaziko osasazo kurhulumente, kwaye uninzi lweenkampani zeoyile zikwakhona e-Abu Dhabi, ikwalikhaya leYunivesithi yaseZared kunye nePhezulu. Iikholeji zeTekhnoloji.
Izibonelelo ezinkulu zeziseko zophuhliso zibandakanya iMina (Port) Zared ne-Abu Dhabi International isikhululo. Esi sixeko sineendawo ezibanzi zenkcubeko, ezemidlalo kunye neendawo zokuzonwabisa, kunye ne-Abu Dhabi Corniche enenjini emangalisayo enikezela ngeekhilomitha ezininzi zokuhamba ngaphandle kwengozi, ukuhamba ngebhayisikile, ukugijimela kunye nokuqengqeleka ecaleni konxweme lwesiqithi i-Abu Dhabi. Ukuthetha ngobume besixeko nako kunomdla indawo apho izakhiwo ezindala ezinjengee-mosque ezincinci zigcinwe kwaye zihlala kakuhle emthunzini wee skyscrapers zanamhlanje.
Ummandla wesibini we-Abu Dhabi, obizwa ngokuba yi-Mpuma yeMpuma, uneedolophu ezinkulu iAl Ain. Le ndawo ichumileyo ityebile iluhlaza eluhlaza eneefama ezininzi, iipaki zoluntu kunye neendawo ezibalulekileyo zakudala. Iyasikeleleka nangobutyebi bamanzi aphantsi komhlaba atya amanzi kwiimbiwa ezininzi zobugcisa. Iindawo ezinomdla ngokukodwa kulo mmandla yiAin Al Faydah Park, Jebel Hafit, ipaki yokuphumla eAl Hili, Al Ain Zoo kunye neAl Ain Museum. Eli likwindawo yezenkcubeko yemfundo kunye nezemfundo kunye neendawo zokuqala zeyunivesithi yase-UAE, iYunivesithi yase-UAE, ebandakanya phakathi kwamakhono ayo amaninzi. Ezothutho lwangaphakathi luqhutywa ngothungelwano lweyona ndlela kwaye iAl Ain iqhagamshelwe kwihlabathi langaphandle kwiSikhululo seenqwelomoya iAl Ain.
I-United Arab Emirates-Isikhokelo seeNgcebiso!
Umda weNtshona eUAE
Umda weNtshona, icandelo lesithathu lolawulo, liquka iilali ze52 kwaye linekomkhulu layo iBida Zayed, okanye isiXeko seZared. Ukuchithwa kwamahlathi okwandileyo kugubungela ubuncinci iihektare ze-100,000, kubandakanya ngaphezulu kwe-20 yezihlahla ezihlala ziluhlaza. Ezona ndawo ziphambili kwioyile zelizwe zibekwe apha, njengoko kunjalo ekucoceni ioyile yelizwe, eAl Ruwais.
Ukongeza kwimimandla emithathu ephambili ye-Abu Dhabi kukho iziqithi ezininzi ezibalulekileyo phakathi kwemirator kubandakanya iDas, Mubarraz, Zirku nase-Arzanah, kufutshane nalapho kukho khona iifama zeoyile ezingaselunxwemeni. Kufutshane ne-Dalma, Sir Bani Yas, Merawah, Abu al-Abyadh kunye neSaadiyat, kunye nezinye iziqithi ezininzi.
I-Emirate ye dubai iya kufikelela elunxwemeni lwaseAraban ye-UAE malunga neekhilomitha ze72 IDubai inendawo c. Iikhilomitha zesikwere ze-3,885, ezilingana ne-5 ipesenti yendawo yelizwe liphela, ngaphandle kwiziqithi.
Idolophu yase Dubai yakhiwe ecaleni komda omxinwa we-10-iikhilomitha ubude, umoya ovuthuzayo owahlula icandelo elisemazantsi kweBur Dubai, intliziyo yesiqhelo yesixeko, ukusuka kwindawo esemantla eDeira.
Iofisi yoMlawuli, kunye neeofisi ezininzi eziphambili zeenkampani ezinkulu, iPort Rashid, iZiko loRhwebo lweHlabathi laseDubai, amasiko, izikhululo zosasazo kunye nabaphathi beposi bonke bakwiBur Dubai. IDeira liziko eliqhuba kakuhle lezentengiso elinoluhlu olukhulu lweevenkile, iimarike, iihotele kunye nesikhululo seenqwelomoya saseDubai. I-Bur Dubai kunye ne-Deira zidityaniswe yi-Al Maktoum kunye neebhulethi zeAl Garhoud, kunye ne-Al Shindagha tun tun edlula phantsi komkrozo.
IJebel Ali, ikhaya lezibuko elikhulu elenziwe ngumntu, inendawo enkulu yezorhwebo ngokukhululekileyo kwizindlu zaseArabhiya uluhlu olukhulayo lwamashishini aphesheya kwezilwandle asebenzisa umda wokuvelisa kunye nendawo yokusasaza ngokutsha.
I-Jumeirah beach yindawo enkulu yabakhenkethi enamanani amaninzi athabathe amabhaso kunye neendawo zemidlalo.
Inland, idolophu ekuthiwa yiHatta yindawo enomtsalane. Kufuphi nedama lamachibi echibi, iHotta Fort Hotel ibekwe kwindawo ebanzi yendawo yokugcina izilwanyana kwaye ibonelela ngesiseko esifanelekileyo sokuhlola i-wadis kunye neentaba ezikufuphi, ezinabela nakwimimandla ye-Omani.
I-Emirate yaseSharjah yanda malunga neekhilomitha ze-16 zommandla wonxweme we-UAE kunye neekhilomitha ezingaphezu kwe-80 ukuya ngaphakathi. Ukongeza kukho indawo ezintathu zikaSharjah ezikunxweme olusempuma, emdeni we-Oman. Ezi ziKalba, Khor Fakkan kunye noDibba al-Husn. I-emirate inendawo yeekhilomitha ezili-2,590 zeekhilomitha, ezilingana ne-3.3 ipesenti yendawo yelizwe liphela, ngaphandle kweziqithi.
Idolophu enkulu yeSharjah, ejonge iArabia Gulf, inamaziko olawulo kunye nezorhwebo kunye nolunye uluhlu lweeprojekthi zenkcubeko kunye nezendabuko, kubandakanya iminyuziyam. Iimpawu eziphawulekiyo zomhlaba zizezimbini ezinkulu ezigubungelayo, ezibonisa uyilo lwamaSilamsi; Inani leendawo zokuzonwabisa kunye neepaki zoluntu ezifana neAl Jazeirah Fun Park kunye neAl Buheirah Corniche. Esi sixeko sikwabalulekile kwiimisila ezininzi ezihle kakhulu. Amakhonkco kunye nehlabathi elingaphandle anikezwe yiSharjah International Airport kunye nePort Khalid.
ISharjah ikwabandakanya ezinye iindawo ezibalulekileyo zeOasis, eyona yona idume kakhulu yiDhaid apho uluhlu olubanzi lwemifuno kunye neziqhamo lutyalwe kumhlaba otyebileyo nochumileyo. IKhor Fakkan ibonelela ngeSharjah kwizibuko elingasempuma lonxweme. Iziqithi ezibini ezingaselunxwemeni zezikaSharjah, u-Abu Musa, ebehleli phantsi komkhosi yi-Iran ukusukela nge1971, kunye noMnumzana Abu Nu'air.
IAjman, ekufutshane nomgama osemantla empuma kwidolophu elikhulukazi yeSharjah, inendawo entle ye16-yeekhilomitha yolwandle lwesanti emhlophe. Yindawo emirate encinci ngokobungakanani bayo bomzimba, igubungela malunga neekhilomitha zesikwere i-259, elingana ne-0.3 ipesenti yommandla welizwe liphela, ngaphandle kweziqithi.
Isixeko esilikomkhulu, iAjman, sinenqaba eyimbali kwiziko lawo. Oku kuhlaziywe kutshanje kwaye ngoku kunemyuziyam enomdla. Ukongeza kwi-Ofisi yoMlawuli, iinkampani ezahlukeneyo, iibhanki kunye namaziko orhwebo, i-emirate iyasikelelwa ngezibuko lendalo apho iPort of Ajman ikhoyo. IMasfut ilali yezolimo ekwiintaba i-110 iikhilomitha ukuya kumazantsi mpuma esixeko, ngelixa indawo yaseManama ilele malunga neekhilomitha ze-60 ukuya empuma.
UMM AL AL ​​QAIWAIN
I-Emirate ye-Umm Al Qaiwain, enomda oselunxwemeni osusela kwiikhilomitha ze-24, ikumda weArabia Gulf kunxweme lwe-UAE, phakathi kweSharjah ukuya kumazantsi mpuma, kunye neRas al-Khaimah ukuya empuma-mpuma. Umda waselwandle u malunga neekhilomitha ze-32 ukusuka kunxweme oluphambili. Indawo yonke ye-emirate imalunga neekhilomitha ezili-777 zekhilomitha, elingana ne-1 ipesenti yendawo yelizwe liphela, ngaphandle kwiziqithi.
Isixeko sase-Umm Al Qaiwain, ikomkhulu le-emirate, simi kwi-peninsula emxinwa ejikeleze i-1 yekhilomitha enkulu ububanzi ngeekhilomitha ze-5 ubude. Iofisi yoMlawuli, amaziko olawulo kunye naworhwebo, izibuko eliphambili kunye neZiko loPhando lweMariculture apho iipali kunye neentlanzi zikhuliswa kwisiseko sovavanyo, zibekwe apha. Isixeko sikwanazo iintsalela ezigciniweyo zenqaba endala, isango layo eliphambili lalixhaswe yimigulukudu yokuzikhusela.
I-Falaj al-Mualla, i-oasis yendalo enomtsalane, ikwi-50 yeekhilomitha kumazantsi mpuma esixeko sase-Umm Al Qaiwain. Isiqithi saseSinayah, silele umgama omde kude nonxweme sibalulekile kwiindawo ezinamahlahla kunye ne-colony yokuzala yeeSocotra cormorants.
URAS AL KHAIMAH
I-Ras Al Khaimah, eyona emantla emantla kunxweme olusentshona lwe-UAE, inonxweme malunga neekhilomitha ezili-64 kwiArabian Gulf, ixhaswe yi-hinterland echumileyo, enendawo eyahlukileyo entliziyweni yeentaba zeHajar ukuya empuma mpuma. Zombini iinxalenye zemida ekwabelwana ngazo ngeSultanate yaseOman. Ukongeza kwingingqi yayo enkulu, iRas Al Khaimah inezininzi zeziqithi kubandakanya nezo zeGreater kunye neThuba elincinci, elihlalwa yiIran ukusukela kwi1971. Umda we-emirate zii-168 zeekhilomitha, ezilingana ne-2.2 ipesenti yommandla welizwe liphela, ngaphandle kwiziqithi.
Isixeko saseRas Al Khaimah sahlulwahlulwahlulwahlulwa kabini ngamacandelo ngu Khor Ras Al Khaimah. Kwicandelo lasentshona, elaziwa njenge-Old Ras Al Khaimah, yiRas Al Khaimah iMyuziyam yeSizwe kunye namasebe aliqela karhulumente. Inxalenye yasempuma, eyaziwa ngokuba nguAl Nakheel, ihlala iofisi yoMlawuli, amasebe aliqela kaRhulumente kunye neenkampani zorhwebo. La macandelo mabini aqhagamshelwe yibhulorho enkulu eyakhelwe ngaphaya kweKhor.
IKhor Khuwayr yindawo yemizi-mveliso ekwiikhilomitha ezi-25 kumantla esixeko saseRas Al Khaimah. Ukongeza kwisamente yayo enkulu, igrabile kunye namashishini emabula, ikwayindawo yePort Saqr, eyona ndawo iphambili yokuthumela kwelinye ilizwe i-emirate kunye nesithili semveli sokuloba eRams. I-Digdagga isithili, kwelinye icala yindawo yezolimo eyaziwayo kwaye ihlala umzi-mveliso wamachiza iJulphar, eyona inkulu kwiArabia Gulf.
Amanye amaziko abalulekileyo ngaphakathi kwi-emirate abandakanya: iAl-Hamraniah, iziko lezolimo kunye nendawo yeRas Al Khaimah International Airport, Khatt, indawo yokhenketho eyaziwa ngokuba yimithombo yayo efumileyo, iMasafi eyaziwa ngokuba neziqhamo zayo kunye nemithombo yendalo. kunye neWadi al-Qawr, intlambo enomtsalane kwiintaba ezisemazantsi.
Ngaphandle kwezinye izinto ezincinci zeSharjah, iFujairah kuphela komi kwi-Gulf of Oman. Unxweme lwalo lungaphezulu kweekhilomitha ze-90 kwaye ubude bendawo yalo budlale indima ephambili kuphuhliso lwayo. Umda we-emirate zii-1165 zeekhilomitha, ezilingana ne-1.5 ipesenti yommandla welizwe liphela, ngaphandle kwiziqithi.
Isixeko saseFujairah, ikomkhulu leemirate, liziko elihluma ngokukhawuleza eliqukethe i-ofisi yoMlawuli, amasebe karhulumente, iinkampani ezininzi zentengiso kunye nehotele ezininzi, kunye nesikhululo seenqwelomoya kunye neZibuko laseFujairah, lelinye lawona manzi aphezulu eoyile amazibuko.
Iimpawu ezibonakalayo ze-emirate zibonakaliswa ziintaba zeHajar ezixineneyo ezijikeleze umda wethafa elichumileyo apho uninzi lwendawo yokuhlala lwenzeke khona. Usikelelekile ngokubabazekayo, uFujairah ubekwe kakuhle ukuba aqhubeke nokwakha urhwebo lokhenketho. Umtsalane ubandakanya ezinye iindawo ezifanelekileyo zokudada, ubuhle bendalo beentaba kunye nonxweme, umdla wenkcubeko kunye nembali kwaye, ngokuqinisekileyo, ukukhanya kwelanga elinobusika.
Idolophu enembali yaseDibba al-Fujairah, emantla ememela, iziko elibalulekileyo kwezolimo kunye nokuloba, ngelixa ilali yase-Bidiya ine-mosque ekhethekileyo emine elawula ilizwe.
Kwenzeka ntoni ukuba ubhalisile kunye Inkampani yeSixeko sase Dubai
Ngaphantsi kwenkqubo yaseburhulumenteni ye-UAE, uMongameli we-Federation unyulwa ngumzimba owaziwa njengeBhunga eliPhezulu labalawuli. IBhunga eliPhakamileyo lelona ziko liphezulu lokwenza imigaqo-nkqubo kwi-UAE, kwaye uMongameli kunye no-Sekela Mongameli bobabini bakhethwe kubulungu bayo ngenxa yeminyaka emihlanu yokuhlaziywa.
IBhunga eliPhakamileyo linamandla omthetho nawokulawula. Ukongeza ekucwangciseni nasekwamkelweni kwemithetho yomdibaniso, iBhunga eliPhakamileyo livuma ukuba iNkulumbuso yonyulelwe nguMongameli kwaye ikulungele ukwamkela ukurhoxa, ukuba iyafuneka.
INkulumbuso yonyulwa nguMongameli. Emva koko unyula iBhunga labaPhathiswa, okanye iKhabhinethi, yokongamela uphuhliso kunye nokuphunyezwa komgaqo-nkqubo wobumbano kuzo zonke iiphothifoliyo zikarhulumente.
Ukongeza kwiBhunga eliPhakamileyo kunye neBhunga labaPhathiswa, ipalamente enamalungu e-40 eyaziwa njenge-Federal National Council (FNC) ikwavavanya umthetho ocetywayo kwaye inike iingcebiso kwiKhabhinethi ye-UAE, njengoko kufuneka njalo. I-FNC inikwe amandla okubiza kunye nokubuza abaphathiswa ngokubhekisele kwintsebenzo yabo, ukubonelela ngezinga elongezelelweyo lokuphendula kwinkqubo. Uphuhliso oluhlasimlisanayo lokuvula ukuthatha izigqibo lwenziwa ngoDisemba 2006, kunyulo lokuqala olungangqalanga lwamalungu e-FNC. Ngaphambili, onke amalungu e-FNC aqeshwa ngabalawuli be-Emirate nganye.
umthombo: I-Emirates Pintrest
Ukuqaliswa kokhetho olungathanga ngqo lubonisa ukuqala kwenkqubo yokwenza inkqubo yoburhulumente ye-UAE isebenze. Ngaphantsi kolu tshintsho, iArmula nganye ikhetha ikholeji yonyulo enamalungu ayo e-100 aphindaphindeka inani lamalungu e-FNC aphethwe ngu-Emirate. Amalungu ekholeji nganye anyula isiqingatha samalungu e-FNC, ngelixa elinye icala liqhubeka nokuqeshwa nguMlawuli ngamnye. Inkqubo yakhokelela kwi-FNC apho umntu omnye kwabahlanu ebekwangabafazi.
Amanyathelo exesha elizayo kulindeleke ukuba andise ubungakanani be-FNC kunye nokomeleza ukusebenzisana phakathi kwayo neBhunga laBaphathiswa, ukuphucula ngakumbi ukusebenza, ukuphendula nokuthatha inxaxheba kukarhulumente kurhulumente we-UAE. Ngo-Novemba we-2008, amagama amalungu e-FNC andiswa ukusuka kwiminyaka emibini ukuya kwemine, ehambelana ngakumbi nezinye izinto zomhlaba. Ukongeza, urhulumente uza kunika ingxelo kwi-FNC malunga nemvumelwano kunye nezivumelwano zamazwe aphakanyisiweyo, kwaye ezo zivumelwano ziya kuxoxwa yi-FNC ngaphambi kokuqinisekiswa kwazo.
Ngokwembali, imeko yezopolitiko ye-UAE ibonakaliswe uthando olukhulu kubunkokeli belizwe kunye namaziko orhulumente. Oku ubukhulu becala kukuphendula ekukhuleni kunye nophuhliso olukhawulezileyo i-UAE efumene isikhokelo sayo kumashumi eminyaka akutshanje.
Imbali ye-UAE kunye neLifa leMveli
Umntu ungene kumhlaba obizwa ngokuba yi-United Arab Emirates (i-UAE) amakhulu amawaka eminyaka kwaye, ngokuqinisekileyo, le ndawo inokuba yadlala indima ebalulekileyo ekufudukeni komntu wokuqala e-Afrika e-Asiya. Ekuhambeni kwexesha indalo yatshintsha kakhulu. Malunga ne-7500 kwiminyaka eyadlulayo, iimeko zemozulu zazingalunganga kwaye kukho ubungqina obubalulekileyo bokuhlala kwabantu, kodwa malunga ne-3000 BC iimeko zaye zaba mandundu ngakumbi, nesiphumo sokuba ezolimo beziphantsi koluntu olomeleleyo.
Urhwebo lweempahla lwasekwa ukusuka kwinqanaba lokuqala kwaye ubhedu lwaluthuthwa ukusuka kwiNtaba zeHajar lusiya kumaziko asezidolophini emantla ekuqaleni kwe3000 BC, ukusuka apho yathunyelwa eMesopotamia. Iindlela zokuhamba kweekhamera zityhutyha umda ukusuka emantla ziye emazantsi zikwabonelela ngenye indlela eya eIndiya. Amachweba afana noJulfar (uRa-al-Khaimah) ekugqibeleni ayakhula kakuhle, ngenxa yomrhwebi wentengiso.
Ngenkulungwane yeshumi elinesithandathu, ukufika kwamaPhuthukezi eGulf kubangele ukuphazamiseka okukhulu kumazibuko asempuma-enxweme afana neDibba, Bidiyah, Khor Fakkan naseKalba. Ukuqala kwenkulungwane yeshumi elinesithoba, isizwe sasekuhlaleni, iQawaisim, sasakhe uluhlu lweenqanawa ezinkulu ezingaphezulu kwamashumi amathandathu kunye nabahambi ngeenqanawa be-20,000- ngokwaneleyo ukoyikisela iBritane ukuba ilawule iindlela zorhwebo phakathi elwandle phakathi kweGulf neIndiya.
imvelaphi Iisouks zeDubai yakudala
Nge-1790s yokuqala, idolophu i-Abu Dhabi yade yaba liziko elibaluleke kangaka lembombo kangangokuba inkokheli yezizwe zakwaBani Yas, inkosana yeAl Bu Falah (inzala yakhe, iAl Nahyan, ngabalawuli abakhoyo baka-Abu Dhabi), ufudukele apho usuka eLiwa Oasis, ezinye iikhilomitha ze150 ukuya emazantsi-ntshona. Kumashumi ambalwa eminyaka kamva, amalungu e-Al Bu Falasah, elinye isebe le-Bani Yas, ahlala emgxobhozweni eDubai, apho aqhubeka khona elawula namhlanje njengentsapho yeAl Maktoum.
Ukuloba kwePearl kwaqhubeka ukuchuma, kodwa ke iMfazwe Yehlabathi yokuQala, ukudodobala kwezoqoqosho kwii-1930s, kunye nokuyilwa kweJapan kweperile ebekekileyo kubangele urhwebo ukuba lwehle - nefuthe elibi kuqoqosho lwendawo.
Ngee-1950s, nangona kunjalo, kwafunyanwa ukufunyanwa kweoyile, kwaye kwi-6 Agasti 1966, Ukuphakama kwakhe (HH) uSheikh Zared bin Sultan Al Nahyan waba nguMlawuli ka-Abu Dhabi. Lwaqala ke ngoko ixesha lokucwangcisa okukhulu kunye nophuhliso, apho u-Abu Dhabi, kunye ne-UAE iphela, baqala ukubambisana nelizwe lonke malunga nokuphuculwa kunye namandla oqoqosho. Nge-2 ngo-December 1971, umanyano lomgaqo-siseko lwamazwe amathandathu aziwa njenge-United Arab Emirates lasekwa ngokusesikweni. Oku kubandakanya i-Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ajman, Umm al-Qaiwain, kunye noFujairah. USheikh Zayed wanyulwa njengo-Mongameli kunye no-HH Sheikh Rashid bin Saeed Al Maktoum, uMlawuli waseDubai, njengo-Sekela Mongameli. Ummeli wesixhenxe, uRa's al-Khaimah, wajoyina i-Federation kwi-1972.
Alithandabuzeki elokuba ukuchuma, ubumbano kunye nophuhliso lwala maxesha oluhlawula i-UAE, lukhulu kakhulu, ngenxa yendima eyakhayo edlalwa ngootata baseka le ngingqi. Kwi-2004, uSheikh Zayed waphumelela njengoMongameli we-UAE kunye noMlawuli wase-Abu Dhabi ngonyana wakhe omkhulu, uHH Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan. Imigaqo kunye nefilosofi awayeyizise kurhulumente, nangona kunjalo, ihlala isentliziyweni ye-Federation kunye nemigaqo-nkqubo yayo namhlanje. Emva kokubhubha komntakwabo, u-Sheikh Maktoum, e-2006, u-HH Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, uMlawuli wase-Dubai, wakhethwa njengo-Sekela Mongameli we-UAE kunye ne-Nkulumbuso.
Umthombo: I-UAE2010 Incwadi Yonyaka - I-UAE yeLungu leMithombo yeendaba
Ubunkokheli bezopolitiko e-UAE busebenza ngaphakathi komgaqo-nkqubo obanzi wamazwe angaphandle owasekwa ngu-Mongameli we-Federation, HH Sheikh Zared bin Sultan Al Nahyan. Le ndlela igxininisa ubuchule, uthethathethwano kunye nemfesane. I-UAE ikhumbula ukuzibophelela kwayo kubamelwane bayo nakwilizwe liphela malunga noxolo lwengingqi, uzinzo nokhuseleko kubo bonke. Ukufezekisa ezi njongo, ikhuthaze ngenjongo ibhlorho, intsebenziswano kunye nengxoxo. Ukuthembela kwezi zixhobo zokunxibelelana kuvumela urhulumente ukuba alandele ubudlelwane obusebenzayo, obulungeleleneyo nobubanzi noluntu lwamanye amazwe.
Umgaqo okhokelayo womgaqo-nkqubo wezangaphandle we-UAE kukukholelwa kwimfuno yobulungisa ekusebenzisaneni phakathi kwamazwe, kubandakanya nemfuneko yokuhlonipha umgaqo wokungaphazanyiswa kwimicimbi yobukhosi bamanye amazwe. I-UAE ikwazibophelela ekusombululeni ngoxolo lweembambano, kwaye ixhasa amaziko ehlabathi ukuba axhase umthetho womthetho wamazwe jikelele kunye nokuphunyezwa kwengqungquthela kunye nezivumelwano.
Enye yezona zinto ziphambili zomgaqo-nkqubo wezangaphandle we-UAE kukuphuhliswa kobudlelwane obusondeleyo nabamelwane bayo kwiArhente yaseArabia kwiBhunga eliManyeneyo le-Gulf (GCC) elinamalungu amathandathu. Ngexesha le-2009, uphuhliso ePalestine, e-Iraq, e-Iran, e-Yemen, e-Afghanistan nasePakistan kunye namanyathelo afunekayo ukujongana nabo enza isiseko sengxoxo-mpikiswano ye-UAE kunye neenkokheli zehlabathi. I-UAE ibekelwe uxolo, ukhuseleko kunye nozinzo kwingingqi yama-Arabhu, kunye nokuqheleka kobudlelwane phakathi kwawo onke amazwe, kunye nesisombululo esilungileyo nesingapheliyo kwingxabano ye-Mbindi Mpuma. Kukholelwa ukuba uxolo alunakufezekiswa ngelixa i-Israeli ehlala iPalestina kunye neminye imimandla ye-Arab iyaqhubeka. Ixhasa isiphelo sokuhlala kwe-Israeli kunye nokusekwa kwelizwe elizimeleyo lasePalestina, kunye neMpuma yeJamani njengelinye idolophu, ngaphakathi komxholo wesivumelwano esisekwe kwi-Arab Peace Initiative.
I-UAE iphindaphinde ikhuthaze inyathelo lamazwe aphesheya ukuba kukhulule ukwakhiwa kweendawo zokuhlala zamaJuda kwiBhanki yaseNtshona kunye naseJerusalem ngeenjongo zokuvuselela inkqubo yoxolo yase-Middle East. Okwangoku, igwebe ubundlongondlongo base-Israeli eGaza kwaye yaveza ubumbano kunye nabase-Palestina abachatshazelwe yimfazwe. I-UAE ibonelele ngaphezulu kwe-Dh11 yezigidigidi (i-US $ 3bn) ukunceda abantu basePalestine, kubandakanya inkxaso-mali yophuhliso lweziseko zophuhliso, izindlu, isibhedlele kunye neeprojekthi zesikolo. Ukongeza, ilizwe linikele nge-Dh638.5 yezigidi (i-US $ 174mn) kulwakhiwo kwakhona eGaza.
I-UAE ibingumxhasi osebenzayo woRhulumente waseIraq kwaye yacela ukuba kuhlonitshwe ingqibelelo ye-Iraq, inkululeko kunye nenkululeko. I-Federation inesinye sezimbalo ezimbalwa zozakuzo zase-Arab ezisebenzayo kunye nozakuzo eBaghdad, kwaye icinyiwe amatyala axabisa i-Dh25.69 billion (iUS $ 7bn) yokuxhasa i-Iraq. Ngaphandle kwengxabano ekudala ikho kunye ne-Iran ngombuzo weziqithi ezithathu ezihlaselweyo ze-UAE kunye nenkxalabo ngenkqubo yenyukliya yase-Iran, i-UAE igcine ivule yonke imijelo yokuzibandakanya eyakhayo enokuthi ikhokelele kwinkqubo yamanyathelo okwakha ukuzithemba kunye nokusonjululwa koxolo kwabo bonke Imicimbi ebalaseleyo. I-Federation iyaqhubeka nokuba negalelo elakhayo kwimizamo yamanye amazwe ejolise ekuzinziseni i-Afghanistan kunye nokuxhasa umnqweno wayo wokubuyisela ukhuseleko. Inike i-US $ 550 yezigidi kwisibonelelo soLuntu kunye nophuhliso phakathi kwe2002 kunye ne-2008 kwaye kuphela kwelizwe laseArabhu elenza imisebenzi yobuntu emhlabeni eAfghanistan.
Ngaphandle kommandla ngokwawo, umgaqo-nkqubo we-UAE wezangaphandle uyaqhubeka nokuziqhelanisa nokulungiselela utshintsho oluvela eluntwini lwehlabathi. Njengenxalenye yendlela yayo ethe tyaba, yakha ubudlelwane phakathi kwamazwe amabini kunye namazwe ahambele phambili kwezoqoqosho kunye namazwe asakhulayo ngelixa ekomeleza ubudlelwane kunye nabalingane bayo bemveli eNtshona. Umba obalulekileyo womgaqo-nkqubo wezangaphandle we-UAE ubeka ugxininiso olukhulu ekukhuliseni unxibelelwano lwezentengiso kunye notyalo-mali namanye amazwe kunye namaziko kwihlabathi liphela. Isikhundla se-Federation esijongene nokukhula ngokukhawuleza njengendawo yemali yase-Middle East siye saqinisa ngakumbi isikhundla sayo njengelungu loluntu lwehlabathi.
Ngenxa yokuba iAsia ithathe ingxaki yoqoqosho yakutshanje ngempumelelo kunakwamanye amazwe ehlabathi, kwabakho izinto ezibonakalayo zokuba amanye amazwe amakhulu aseAsia azakudlala indima ebonakalayo kwihlabathi ipolitiki. Ukuqonda oku kutshintsha, kunye nokubonisa umnqweno wokudibanisa ubudlelwane, ubunkokheli be-UAE buye baqhubeka nokuphuhlisa ubudlelwane bayo kunye namazwe aliqela e-Asia, kubandakanya i-China ne-India. Impumelelo enye yezopolitiko ngexesha le-2009, ekwabonisa ukukhula kwayo kwinqanaba lehlabathi, yeza xa u-Abu Dhabi wakhethwa ukuba abambe ikomkhulu le-International Renewable Energy Agency (IRENA).
I-UAE ipapashe uxwebhu lomgaqo-nkqubo malunga namandla enyukliya kubahlali, sebenzisa ukugxininisa imigaqo-nkqubo yayo ecacileyo kunye nokukulungela ukuthobela onke amanyathelo ahambelana nokhuseleko. Okwangoku, iBhodi yeRhuluneli ye-Atomic Energy Agency yeBhodi yaBalawuli yavuma ukuvunywa kwe-UAE kwamanyathelo ongezelelweyo okuhlola inyukliya eyaziwa ngokuba yiProtocol yokuGunyazisa, eqinisekisa ukuzibophelela kwisivumelwano seNyukliya seNzungu. Enye indawo ephambili yokubambisana kwe-UAE ibikumlo wehlabathi wokulwa nobunqolobi, kubandakanya uloyiko oluxhaswa ngurhulumente.
Ngaphandle kokuchaphazeleka kwengxaki yemali kunye noqoqosho kumgangatho wezoqoqosho kunye neeprojekthi zophuhliso, i-UAE iyaqhubeka neenkqubo zayo zokunceda, zokunceda kunye nophuhliso kumazwe amaninzi. Iinzame zalo kule meko zamkelwa nguNobhala-Jikelele we-UN u-Ban Ki-moon, osincoma isigxina saso sabantu kunye nomsebenzi wokuphelisa ukubandezeleka kwabantu kwiindawo ezahlukeneyo zehlabathi ngexesha leentlekele zemvelo kunye neengxwabangxwaba zabantu.
Intsholongwane kaGawulayo isonjululwa ngemibutho ephambili, enje ngeNgxowa-mali ye-Abu Dhabi ethi, nge2009, ixhase iiprojekthi eMorocco, Burkina Faso, Tanzania, Bangladesh, Palestine, Benin, Yemen, Afghanistan, eSudan, Eritrea nakwezinye; Isigunyaziso iRed Crescent (enye yezona ntlangano zilishumi ziphambili zeKomiti yeHlabathi yeRed Cross), ezona zinto zisebenzayo zibandakanya ukubonelela ngamanzi okusela kumazwe athwaxwa yimbalela kunye nenkangala, ukuxhobisela izibhedlele kwiindawo ezikwanamazwe ahlwempuzekileyo, kwaye ejolise ikakhulu kwimfundo yabantwana kumazwe ahluphekayo. Ukongeza, uNoor Dubai, inyathelo lokubonelela ngezizwe ngezizwe lokuthintela kunye nokunyanga nokungaboni kunye nokubona okuphantsi, lisebenzisana noMbutho wezeMpilo weHlabathi kunye neArhente yeHlabathi yoThintelo lobumfu. Kwiminyaka yakutshanje, kugxininisiwe kuncedo loluntu kwabo bachatshazelwe yintlekele yendalo okanye ungquzulwano nentlupheko.
Ngokubanzi, kule minyaka mithathu inesiqingatha idlulileyo i-UAE ibenegalelo elingaphezulu kweebhiliyoni ze-Dh255 (i-US $ 69.4 bn), kwimali mboleko, izibonelelo kunye noncedo ibonelelwe kwisiseko sikarhulumente-sikarhulumente, i-Federation nayo igalelo eliphambili kwiiarhente zamanye amazwe, zenze ukuba i-Dh100 yezigidigidi (i-US $ 27 bn) ifumaneke kwiNgxowa-mali yeMali yeHlabathi kunye neBhanki yeHlabathi. I-Ofisi ye-AUE yokuNxibelelanisa uNcedo, esekwe ngokubambisana ne-Ofisi ye-UN yokuLungelelanisa iMicimbi yokuHlaliswa kwaBantu, yingqungquthela esandula ukusekwa eya kuthi ikhokelele i-Federation ukuba ibandakanyeke kakhulu kuncedo lwenqanaba lehlabathi, endaweni yokugxila kwinkxaso ngakwicala elinye lendabuko. kuthetha.
Ngaphandle kwento yokuba i-UAE ngoku isendleleni yokubuyela kwimeko yesiqhelo, ichaphazeleke kakhulu kukudakumba kwezoqoqosho kuqoqosho lwehlabathi. Ngaphandle komsinga wokuqala obangelwe ngamaxabiso aphezulu e-oyile, I-Federation yade yachukunyiswa kukudodobala kwehlabathi okwakhokelela ekuthambekeni kwemfuno yeoyile, kutsala amaxabiso ukuya ngaphantsi kwesithathu kwentlahla yabo kaJulayi 2008. Ukubuyela umva kwenkxalabo enkulu yecandelo labucala kukhokelele ekucuthekeni okubukhali kweendawo zentengiso yesitokhwe. Ngaphaya koko, ukuhla kwamacandelo ezokwakha nawepropathi, ezona zinto ziphambili zokwandiswa koqoqosho lwe-UAE, kwakuthetha ukuba ukukhula kwi-2009 kwakusezantsi kakhulu kwiminyaka yangaphambili. Ngo-Okthobha i-2009, iSebe loqoqosho lwezoqoqosho liqikelele ukukhula kwe-1.3 yepesenti kulo nyaka.
Imizobo ye2009 ibiphawuleka ngokungafaniyo ne-2008, xa ukukhula kwimveliso yangaphakathi ye-UAE (GDP) ifikelele nge-7.4 ipesenti. Ukukhokelela ekunyukeni yayiyicandelo leoyile kunye negesi, elaye lakhula ngepesenti ye-35.6, ngenxa yokonyuka kwamaxabiso eoyile. Amanye amacandelo okukhula okuzinzileyo e2008 abandakanya icandelo lezokwakha (ipesenti ye-26.1), amashishini okuvelisa (i-17.2 ipesenti), icandelo lezemali (i-15.9 ipesenti), ukuthengisa okuthengiswayo kunye neenkonzo zokulungisa (i-18.7 ipesenti), kunye neeresityu urhwebo lwehotele (i-15.1 ipesenti).
Kwi-2008, ibhalansi yezorhwebo ye-UAE inyuke nge-35.3 ipesenti, isuka kwi-Dh170.85 bhiliyoni (i-US $ 46.5 bn) kwi-2007 ukuya kwi-Dh231.09 yezigidigidi (iUS $ 62.9), ngenxa yokunyuka kakhulu kwepesenti ye-33.9 kwixabiso lokuthumela kunye nokuthumela kwelinye ilizwe kunye nokunyuka kwepesenti ye39.7 kwixabiso lokuthunyelwa kweoli ngaphandle, kudityaniswa nokunyuka ngepesenti ye37.1 kwixabiso lokukhutshelwa ngaphandle. Imimandla yorhwebo yasimahla yabona ukonyuka kwepesenti ye-16.4, eyafikelela kwi-Dh97.46 yezigidigidi (i-US $ 26.6 bn) kwi-2008. Okwangoku, ukuthunyelwa ngaphandle kuye kwafika kwi-Dh 345.78 yezigidigidi (i-US $ 94.2 bn); ukunyuka kwe-33.4 ipesenti. Ukunyusa imfuno yekhaya ngenxa yokwanda kwenani labemi kunye nengeniso, kunye nokukhula okuqinisekileyo kurhwebo lokuthumela ngaphandle, kuye kwanceda ukuthengisa ixabiso lokungenisa ngaphakathi ngepesenti ye33.4 ukuya kufikelela kwi-Dh735.70 billion (iUS $ 200.4 bn).
Ukunyuka kwamanani kwiinyanga ezilishumi elinanye ze2009 zime kwi-1.7 ipesenti-ezantsi kakhulu ukusuka kwiminyaka yangaphambili. Amaxabiso aphantsi ezindlu kunye neendleko zokutya zinegalelo kuxinzelelo lwe-deflationary kuqoqosho. Kwi-2008, ukunyuka kwamaxabiso kuye kuma kwi-10.8 ipesenti, njengeengeniso enkulu evela kumaxabiso aphezulu eoyile ekukhuleni kwezoqoqosho, ukudala ukunqongophala kwepropathi kunye neenkonzo. Kwangelo xesha, i-US dollar ebuthathaka kunye namaxabiso aphezulu okutya aphesheya kuye kwenza ukuthengisa kwahluma ngakumbi. Umgaqo-nkqubo weBhanki eNkulu ye-UAE ibikukugcina amaxabiso asemthethweni kwizinga eliphantsi ukuze kuvuseleleke uhlumo loqoqosho.
Ushishino kunye nokwahluka
Amacandelo angenayo i-hydrocarbon enza i-63 ipesenti ye-GDP kwi-2008, ngaphandle kwamaxabiso aphezulu eoyile negesi, enegalelo kwi-Dh 2.16 trillion (iUS $ 590 bn) kuqoqosho. I-UAE inethemba lokunciphisa igalelo lecandelo leehydrocarbons ukuya kwiipesenti ze-20 kwiminyaka elishumi ukuya kweli-15 kwiminyaka emihlanu ngokunyusa ukukhula kwenye indawo kuqoqosho. Ukuveliswa kwemizi-mveliso kunye necandelo kuyaqhubeka ukuba ngamacandelo abalulekileyo e-Shishini lokufuna uguquko lwezoqoqosho, ukwakha kumacandelo asele eqhuba njenge-aluminium kunyibilikiswa, i-ceramics kunye neyeza zamayeza.
Kwi-2009, u-Abu Dhabi watyhila umbono wakhe wezoqoqosho i2030, ebeka imephu yendlela eyahlukeneyo yezoqoqosho. Inkampani iMbadala Development, icandelo lobuchule botyalo-mali likaRhulumente wase-Abu Dhabi, ihlawula indima enkulu kuphuhliso lommandla, kubandakanya neeprojekthi kulwakhiwo lwenqwelo moya (izixhobo zeenqwelo moya) ezemveliso, ezemali, ezamandla kunye nolonwabo. I-Abu Dhabi ikwagxininisa kwimithombo yamandla ahlaziyekayo kunye nenkampani yamandla ekarhulumente i-Masdar eyinxalenye yesi sicwangciso. IMasdar City, ethi le nkampani ichaze njengesixeko sokuqala senkunkuma ye-carbon engathathi cala yehlabathi kunye nekomkhulu le-International Renewable Energy Agency (IRENA) ', ekugqibeleni iya kuba ngabahlali be40,000 kunye nabaqhubi bemihla ngemihla be-50,000 abasebenza kwamanye amafemu e-1500 aluhlaza. IMasdar ikutyala imali kakhulu kwitekhnoloji ekhula ngokukhawuleza yeepaneli ezinamandla elanga, ezibandakanya ukwakhiwa kwesityalo e-Abu Dhabi ekwaziyo ukwenza iipaneli ezaneleyo nyaka ngamnye ukuvelisa ii-megawatts ze-130
IDubai, ngelixa ihlengahlengisa ezinye zeenkampani zayo eziphambili ezixhaswa ngurhulumente, iyaqhubeka nokwakha amandla ayo amakhulu kumashishini, ukhenketho kunye norhwebo. USharjah uyaqhubeka nezicwangciso zophuhliso lwamashishini, kwaye iRa-Khaimah Investment Authority (iRAKIA) icwangcisa ukumilisela umxholo weendawo ezinomzi mveliso ukuze kudaleke amaqela ezakhiwo. UFujairah useka indawo ebonakalayo yasimahla, eyokuqala kwi-UAE, eya kuthi ivumele iinkampani ezizezinye ukuba zenze ishishini Ngaphantsi nje kwento ihlawuliswa yimimandla yasimahla. Ukongeza, URhulumente wase-UAE ukwinqanaba lokugqibela lokulungiselela umthetho wezemveliso nolindeleke ukuba ukhuthaze ukwenziwa kwamashishini esizwe.
Iiprojekthi ezinkulu ezininzi zigqityiwe kwi2009, enye yeyona nto inomtsalane sisiqithi saseYas, indawo yokuphumla e-Abu Dhabi nasekhaya kwisiphaluka sase Yas Marina, esasibambe iFomyula One Grand Prix ngoNovemba 2009. Izikimu ezinkulu zeziseko zophuhliso ezigqityiweyo, kubandakanya i-Dh28 yezigidigidi (i-US $ 7.62 bn) i-Dubai Metro, inkqubo yokuhamba ngaphandle kokuqhuba ihamba nentliziyo ye-emirates; I-Sheikh Khalifa ibhulorho, edibanisa i-Abu Dhabi Island kunye neSaadiyat kunye ne-Yas Island; kunye ne-Palm Jumeriah Monorail. Esona sakhiwo sikhulu emhlabeni; i-Burj Khalifa eDubai, evulwe ngeveki yokuqala ye-2010.
Ukhenketho licandelo elibalulekileyo lokukhula kulo lonke uqoqosho lwe-UAE. I-Abu Dhabi kunye ne-Dubai bobabini baye baqhubeka nokuzilolonga kwakhona, egxile kwiihotele eziphambili kunye neendawo zokungcebeleka zokuzonwabisa. Ukusuka kwisiqithi esitshisayo sesaSir Bani Yas kwintshona ye-Abu Dhabi, indawo ecekeceke ye-Qasr al-Sarab, kwii-Liwa Oasis, kunye ne-Al Maha kunye ne-Bab al-Shams eDubai ukuya kwiindawo ezifanelekileyo zonxweme zaseFujairah, Ra's al I-Khaimah kunye ne-Ajman, i-UAE ibonelela ngamaziko axabisekileyo kwezinye iindawo ezikude nezihle. Iiprojekthi zefulegi ezinjengeEmirates Ihotele Ihotele, iBurj al-Arab, iMadinat Jumeirah, kunye neBruj Khalifa bancedisile ukuphakamisa ubume belizwe, ngesiphumo sokuba i-Federation inokuninzi inokunikezela ngezona ndwendwe zifunwayo. Ngaphezulu kwe-11.2 yezigidi zabakhenkethi ezilindelwe kwi-2010, exhasa impumelelo kwinzame ze-UAE zokunyusa utyalomali kushishino lokubuka iindwendwe.
UkuLula ukwenza iShishini
Kwi-2009, i-UAE yakhwela kwiindawo ezilishumi elinine kwingxelo ethi 'Ukwenza Business' ehlanganiswe yiBhanki yeHlabathi kunye neArhente yezezimali yeHlabathi. Ingxelo eyamkelwe kwilizwe jikelele ihlola amazwe ukuba kulula kangakanani kumashishini amancinci naphakathi ukuba aqhube ishishini. I-Federation yonyuselwa kwisikhundla samashumi amathathu anesithathu kwisimo sehlabathi sokuhlaziywa kolawulo, ngokuyinxenye ngenxa yesigqibo sikaRhulumente sokupheliswa kwe-Dh150,00 (i-US $ 40,871) yemali eyinkunzi eyimfuneko kumashishini aqalayo.
Ezinye izizathu ezibini zokunyuka kwe-UAE yayikukulungelelanisa inkqubo ebandakanyekayo ekufumaneni imvume yokwakha kunye nokuphuculwa kwamandla eDubai amazibuko.
Utyalomali kwiimarike zaphesheya kudala lubalulekile kwinjongo ye-UAE yokudala umnatha wokhuseleko kwizizukulwana ezizayo, ngakumbi abo bathi ngenye imini bajongane nokuphelelwa yindawo yokugcina amanzi. Phakathi kwamaqumrhu amakhulu otyalo-mali e-Emirates zezi: i-Abu Dhabi Investment Authority, i-Abu Dhabi Investment Council, i-AD AD, i-Dubai Holding, Dubai Holding, Dubai Holding Commerce Iqela lokuSebenza (kubandakanya iDubai Properties Group, Sama Dubai, Tatweer, Iqela iDuabi Holding Investment), kunye neDubai World. Ukongeza, uMubadala, i-Abu Dhabi National Energy Company (Taqa) kunye ne IPetroleum yeHlabathi Inkampani yotyalo-mali (i-IPIC) ilandela uphuhliso lwamandla phesheya.
Amanyathelo athathwe ngamaziko abumbeneyo kwi2008 ukubuyisela ukuzithemba kwinkqubo yezemali, kubandakanya ne-UAE Central Bank Dh50-billion (US $ 13.6 bn) indawo yokuxhasa ababolekisi bendawo, kunye ne-UAE Ministry yezezimali Dh70 billion (US $ 19 bn) Inkqubo yenkxaso, yenzelwe ukuvuselela ukubolekisa, ukuthengisa imalike kunye nokunika amandla kuqoqosho. Kwi-2008, i-Federal Government ikwadize ukuba iza kwenza i-Dh120 yezigidigidi (i-US $ 32.7 bn) efumanekayo kwiibhanki kwilizwe liphela phantsi kweenkqubo ezahlukeneyo zokuboleka imali, kunye nesiqinisekiso sokufakwa kwemali kunye nokubolekwa kwemali kwiminyaka emithathu.
NgoFebruwari 2009, iSebe lezeMali lase-Abu Dhabi lajova i-Dh16 billion (i-US $ 4.35 bn) kwiibhanki ezintlanu ezinkulu. La manyathelo ancede ekuqinisekiseni uzinzo kwimakhishithi ebhankini, nangona iingeniso zebhanki ziye zawa kwikota yokuqala, kwaye kwamiselwa ikomiti yezemali engxamisekileyo yeCandelo loqoqosho ukuze liqwalasele amanye amanyathelo okuxhasa ababolekisi.
Ngexesha lonyaka, iibhanki zinike ingxelo yokonyuka kokungathembeki kunye neentlawulo ezilahlekileyo kwimali mboleko yorhwebo kunye nomthengi. Ngenxa yoko, iibhanki ezidwelisiweyo ze-UAE zathatha indlela yokulumka ngokunika ingxelo-ephezulu kunendlela eqhelekileyo kunikwa imali mboleko ezimbi. Ukuncedisa ekuqeshweni kwemali engaphezulu kwenkqubo yebhanki, i-Central Bank iyalele ababolekisi ukuba ukusuka kwi-2010 kufuneka bathobele imithetho ye-Basel II malunga nokwanela kwemali kwiibhanki kwaye banike ingqalelo ngakumbi kulawulo lomngcipheko nolawulo. Urhulumente waphinde wabhengeza izicwangciso zokudibanisa ababolekisi ababini abona bakhulu bakwa-Emirates, i-Amlak kunye neTamweel. Oku kuthathwa njengokubaluleke kakhulu ekubuyiseleni kwakhona kwintengiso yezindlu.
Intlawulo yemali mboleko efunyenwe kwintengiso ngooRhulumente abaphethwe ngurhulumente yayijolise kwimisebenzi kwi-2009. NgoFebruwari 2009, Urhulumente waseDubai uthengise i-Dh36.7 yezigidigidi (i-US $ 10 bn) ngebhanti kwi-Central Bank yokunceda iinkampani kulawulo lwayo ukwenza iintlawulo zamatyala kunye nokuhlawula iikontraki. Ukujonga ukuhanjiswa kwale mali, i-Dubai Financial Support Fund yasekwa ngoJulayi 2009. Kwi-25 ngo-Novemba 2009, Urhulumente wase-Dubai wabhengeza ukuba idibene ne-Dh18.4 yezigidi (i-US $ 5 bn) ekuxhaseni ngemali kwi-National Bank Abu Dhabi kunye ne-Al Hilal Bank, zombini ezilawulwa yenye yeengxowa-mali ezinkulu zika-Abu Dhabi. IKhansile yoTyalo-mali yase-Abu Dhabi. IDubai ikwalawule ngempumelelo amatyala amakhulu e-2009, kubandakanya i-Dh12.47 bhiliyoni (i-US $ 3.4 bn) ukuphinda ichaphazele umthengisi wetyala u-Borse Dubai ityala ngoFebruwari, kunye nokuhlawulwa kwe-Dh3.67 billion (iUS $ 1 bn) yeDubai Civil Aviation Authority Ibhondi yamaSilamsi ngoNovemba.
Izitokhwe ezidweliswe kwiMakethi yezeMali yaseDubai yaphela unyaka nge-10.2 ipesenti, kodwa bezingaphezulu kune-70 ipesenti ukusuka ezantsi kunyaka ophelileyo. Izitokhwe kwi-Abu Dhabi Securities Exchange inyuke nge-14.7 ipesenti kwi-2009, kodwa yayisezantsi nge-46 ipesenti ukusuka kwi-2008 ephezulu.
Ngamaqhezu enobunzima bomhlaba yabamelwane bayo base Gulf, i-UAE ayisiyiyo eyokuphela kweli lizwe ithumela i-oli emdaka ngaphandle, ISaudi Arabia, I-Iran ne-Iraq.
I-UAE inendawo yesibini eqinisekisiweyo yehlabathi ye-oyile engaqhelekanga, kunye nolwesixhenxe ngobungqina obuqinisekisiweyo bolondolozo lwerhasi yendalo. Nangona ingumvelisi weoyile oyisixhenxe kuphela ngobukhulu emhlabeni, ingoyena mthengisi we oli uthengise elizweni ngobukhulu, ibe yiRussia ne-Saudi Arabia kuphela ethengisa kakhulu. Ukuthunyelwa kwayo okucekeceke kusondela kwezo zaseIran, naseKuwait, zonke ezinendawo enkulu yokugcina izinto.
Kwi-2009, ngenxa yokuthotyelwa komzekelo wokuphulukiswa kwemveliso egciniweyo efungelwe nguMbutho wamazwe athumela izinto ngaphandle kwePetroleum (OPEC) ukuzinzisa iimarike zeoyile, iziphumo zeoyile ze-UAE zehla zaya kutsho kwi-2.3 yezigidi zemipu ngosuku (bpd) ukusuka kwi-2.9 yezigidi kwi-2008. Ukuveliswa kwegesi kume malunga ne-7 yeebhiliyoni zeenyawo zekreyubhu ngemini. I-UAE iqhubela phambili ngezicwangciso zokwandisa amandla e-oyile kunye negesi yokuvelisa, kodwa yandisile ixesha lokuphuhliswa kweoyile ngelixa ibeka phambili iiprojekthi zerhasi.
Kwasekuqaleni kwe-2009 i-Federation yogcino eqinisekisiweyo ye-Federation yema kwi-227.1 trillion yeenyawo zenyawo-igesi eyaneleyo ngaphezulu kweminyaka ye-130 yokubonelela ngamaxabiso emveliso akutshanje. Phakathi kwezinye izinto, oku kuthetha ukuba ukunqongophala kwerhasi i-Emirates akubangelwa kukunqongophala kwemali egcinwe kwigesi, kodwa kukungaphuhlisi okwaneleyo, nangona uninzi lweegesi ezigciniweyo ziluhlobo olunendleko kwaye kunzima ukuluvelisa. I-Abu Dhabi ibaluleke kakhulu ekunyuseni amandla okuvelisa i-UAE kunye negesi, kuba iqulethe malunga ne-94 yepesenti ye-oyile ye-Federation kunye ngaphezulu kwe-90 yepesenti yogcino lwegesi. Yandisa umthamo wazo zombini ukuvelisa ioyile kunye negesi.
Okwangoku, ukuveliswa kweoyile yaseDubai, ebikade ibala malunga nesiqingatha se-GDP ye-emirate, iwile kakhulu kwincopho ye-1991 ye-410,000 bpd; nge2007 yayisele yehle kwi-80,000 bpd. Ngelixa iqhubeka impompo igesi evela kumhlaba ongaselunxwemeni, i-Dubai nayo itya ipetroli ngakumbi kunokuba ivelisa, kwaye iyaxhomekeka ngakumbi kuthengiso kumazwe angaphandle ukwenza umahluko. I-emirate sele ithengwe ngamakhulu ezigidi zee-cubic tsoka ngosuku kwirhasi kwiDolphin Energy, inkampani ka-Abu Dhabi ethutha irhasi ngombhobho ovela eQatar.
Ezine ze-UAE ezishiyekileyo ezi-Emirates zinexabiso elincinci lemveliso yeoyile negesi; I-Fujairah ayivelisi ioyile okanye igesi, nangona inkqubo yokuhlola unxweme ngoku iqhubeka. Nangona kunjalo, izibuko lesibini ngobukhulu kwihlabathi limi kunxweme lwalo. I-port ye-Fujairah, kuLwandle lweArabia, iphatha malunga ne-1 yezigidi zeetoni ngenyanga ngepama yokuhamba kwaselwandle kunye nezinye iimveliso zeoyile. Ukufika kwe-2008 yokungeniswa kwegesi ngepayipi yamandla kaDolphin avela eQatar kudibanise amandla kunye nophuhliso lwamanzi kumzi mveliso wokuphembelela wasekhaya.
I-IPIC, engumnini kaRhulumente wase-Abu Dhabi, yakha ipayipi yeoyile e-crude ye-oyile yokuhambisa i-150,000 bpd yeoyile kumacandelo aselunxwemeni e-Abu Dhabi e-station entsha yokuthumela kwelinye ilizwe e-Fujairah. Iprojekhthi ijonge ukubonelela ngendlela yokuthumela ngaphandle i-Abu Dhabi engaxinanga edlula kwindawo ekugudlwa kuyo iilwandle kwindawo ekuma kuyo iHormuz. Kucwangciselwe ukugqitywa kwi2010, ngokuthunyelwa kwetanki lokuqala ukusuka eFujairah kulindeleke ekuqaleni kwe-2011. I-IPIC ikwaphuhlisa indawo yokucoca ioyile kunye nendawo yokugcina iimpahla kwizibuko laseFujairah.
Phantse i-10 yepesenti yokubonelelwa kwehlabathi liphela koovimba beoli abangaqinisekanga kunye nolondolozo lwendalo lwesihlanu lwegesi, i-UAE liqabane elibalulekileyo kunye nomthengisi onoxanduva kwiimarike zamandla zehlabathi. Ngelixa iphambili kwezoqoqosho, ukuthunyelwa kweoyile ngoku kuthatha kuphela ipesenti ze-30 zemveliso epheleleyo yasekhaya, ngenxa yemigaqo-nkqubo enoburhulumente eyenzelwe ukwahlula uqoqosho lwe-UAE.
I-UAE ikwalandela inkqubo yokuhlaziya amandla kunye nokusebenza kwamandla. Kwi-2005 i-UAE yaqinisekisa i-Kyoto Protocol kwiNgqungquthela ye-UN yokutshintsha kweMozulu, yaba lelinye lamazwe amakhulu avelisa i-oyile ukwenza njalo. I-Abu Dhabi ikwaseke elinye lamanyathelo ebanzi ahlaziyekayo kunye nelinye lamandla ombane.
Ioyile kunye negesi yendalo
I-Emirate nganye ilawula imveliso yayo yeoyile kunye nophuhliso lwezixhobo. U-Abu Dhabi uphethe ngaphezulu kwe-90 yeepesenti yemithombo yeoyile ye-UAE, okanye malunga nemipu ye-92.2 yezigidi. I-Dubai iqulethe i-400 yezigidigidi ze-4 ze-barrel, zilandelwa nguSharjah kunye ne-Ras al-Khaimah nge-1.5 yezigidigidi kunye ne-100 yezigidi zemiphanda yeoyile, ngokulandelanayo.
I-Abu Dhabi inembali yokwamkela utyalomali kwicandelo labucala kwicandelo lokuphononongwa kweoyile kunye negesi kunye necandelo lemveliso. Ewe, u-Abu Dhabi wayengoyena mntu ulilungu le-OPEC ukuba angabinamali yokubamba abatyali bamanye amazwe ngexesha lotshiso lwesizwe elitshabalalise ishishini leoyile kunye negesi kwimbasa ye-1970, kwaye iyaqhubeka nokuxhamla kumazinga aphezulu otyalo-mali lwecandelo labucala. Namhlanje iinkampani zeoyile zamanye amazwe ezivela e-United States, Japan, France, Brithani nakwamanye amazwe ziyaqhubeka ukubamba iindawo ezihlanganisiweyo phakathi kwe-40 kunye ne-100 yepesenti kwi-Abu Dhabi enkulu ye-oyile.
I-UAE ithumela ipesenti ye-60 ye-oyile engaqhelekanga kwiJapan, iyenza ukuba ibe ngumthengi omkhulu we-UAE. Ukuthunyelwa kwelinye ilizwe ngerhasi kuphantse kube kuya eJapan, ngumthengi omkhulu wegesi oxutywe ngumhlaba, kunye ne-UAE ebonelela phantse enye yesibhozo yazo zonke iimfuno zaseJapan.
Ngenxa yobuninzi beendawo ezichaphazela iindleko zothutho, i-UAE ithumela ngaphandle isixa esincinci seoyile kunye negesi kwi-United States. Nangona kunjalo, i-UAE ngumthengisi obalulekileyo weoyile kunye negesi kwimarike yamazwe aphesheya kwaye okwesibini yiSaudi Arabia kuphela malunga nomthamo wemveliso yeoyile eseleyo. Ukongeza, izicwangciso ezivuthayo ze-UAE zokwandisa amandla emveliso ziya kuba negalelo elikhulu ekucimeni ikamva, ukunyuka okuqhutywa yimfuno kwixabiso leoyile ekrwada.
IProjekthi yeDolphin, ethe yangenisa igesi yendalo ngombhobho ukusuka e-Qatar ukuya e-UAE, yayisisivumelwano sokuqala samandla ombane esinqamlezayo phakathi kwamazwe eGulf. Le projekthi iza kukhulula irhasi ka-Abu Dhabi yokuvuselela ioyile ekrwada kunye nokuthumela kwelinye ilizwe. I-Petroleum eyenzekileyo yase-United States kunye neTotal yeFrance nganye ine-24.5 yepesenti yokulingana kwiprojekthi, ngelixa urhulumente wase-Abu Dhabi ephethe ipesenti ye-51 eseleyo. Ukuhanjiswa kokuthengiswa okokuqala kwegesi yendalo ye-Qatari kwaqala ngehlobo le-2007 kwaye kuya kuqhubeka kuyo yonke iminyaka yonyaka we-30 yokuphuhlisa kunye nokwabelana ngesivumelwano esayiniweyo noRhulumente we-Qatar.
Ukugcina ukuhanjiswa kweoyile
Kwiinzame zokuphucula ukhuseleko loncedo, oorhulumente be-Gulf bafundela ukuphuculwa kwemibhobho yeoyile eya kuthi idlule kwi-Strait of Hormuz. Malunga nesiqingatha sesibini seoyile yehlabathi ethengiswayo okwangoku ihanjiswa ngetanki ngenqanawa ebanzi yomgama we-34.
Ukuba yakhiwe, imibhobho inokuhamba nje nge-6.5 yezigidi zemigodi yeoyile ngosuku okanye malunga ne-40 yepesenti yemali ethunyelwa ngoku kwi-Strait. Ukwakhiwa kwepayipi yokuqala, encinci yayiya kuthwala ioyile ukusuka e-UAE kwintsimi yeoyile yeHabshan ukuya kwi-Emirate yeFujairah, ebekwe ngaphandle komda kwiGulf of Oman.
Ukwandiswa kokuBonelela ngeoyile
I-UAE iyaqhubeka nokwandisa imveliso yayo yokubonelela kwiimarike zamandla zehlabathi. Ngelixa ezinye izizwe ze-OPEC kunye nezizwe ezininzi ezingekho phantsi kwe-OPEC zibone ukuhla kwemveliso kule minyaka mihlanu idlulileyo, i-UAE inyuse imveliso yayo yeoyile emdaka malunga neepesenti ze-31. Akukho nyaka ngelo xesha unemilinganiselo ephakathi yemveliso eye yawa ngaphantsi konyaka odlulileyo.
Ukuguqukela kwixesha elizayo, ukunyuka kweoyile kunye negesi kwimibutho e-UAE iyaqhubeka nokuchonga iiprojekthi ezintsha ezijolise ekunyuseni amandla emveliso yesizwe e-crude ukuya kwi-4 yezigidi zemipu ngosuku nge-2020, eya kuthi inyuke ngepesenti ye-40 malunga nangoku amanqanaba emveliso.
Umbane: Ukwandiswa ngokukhawuleza kweemfuno
Ukukhula koqoqosho okuqhubayo kulo lonke i-UAE kukhokelele ekunyukeni okukhulu kwemfuno zombane. Uqikelelo lwangoku lubonisa ukuba imfuno yangaphakathi yamandla iya kuphindwa kabini nge-2020. Ngenxa yokunqongophala kwezixhobo zamandla ombane kwaye zikhawuleza kangakanani, ezifana negesi yendalo, zingaziswa kwimarike, kunye neenkxalabo malunga notshintsho lwemozulu, urhulumente wase-UAE usungule amanyathelo ahlukeneyo ajolise ekuchongeni ezinye iindlela zokuvelisa amandla afunekayo ukuhambisa ipetroli. uqoqosho.
I-UAE ivavanya amathuba okuphuhlisa inkqubo yamandla enyukliya enoxolo. URhulumente we-UAE wazi kakuhle iimvakalelo ezibandakanyekayo ekufakweni kwempembelelo zenyukliya kwanokuvavanywa okulula kokukhoyo. Ngokuhambelana, URhulumente wase-UAE usebenze ukwenza ukuba iinjongo zoxolo nezingathandabuzekiyo zicace, ngokubhekisele kuhlolo lwenkqubo yangoku yoxolo lwamandla enyukliya kunye nokusasazwa kwayo okunokubakho kwixesha elizayo. Urhulumente wakhupha iphepha lomgaqo-nkqubo elingene nzulu eluntwini, ejonga indlela ukuphuculwa okunokubakho kwamandla enyukliya okuya kulandelwa ngokukhuselekileyo, ngokukhuselekileyo nangokuthula. Njengenxalenye yokuzibophelela kwayo ekubonakaleni, engashukumiyo, ukhuseleko kunye nokhuseleko, i-UAE igqibe kwelokuba ayizukulandela ukucebisa nge-uranium kwaye endaweni yoko ixhomekeke kwimarike yamazwe aphesheya ukuze ibe yinyukliya. Kuyo yonke le nkqubo, i-UAE isebenze ngokusondeleyo ne-Arhente ye-Atomic Energy yeInternational (IAEA) kunye nabanye oorhulumente, kubandakanya ne-United States.
Ngaphandle kwendima ebalulekileyo yeoyile kunye negesi kwi-UAE, ilizwe lenze izibophelelo zokophula umhlaba kwamanye amandla. I-UAE ithatha amanyathelo okunciphisa ukuphuma kwekhabhoni ngamanyathelo aphambili kwi-Abu Dhabi nase Dubai.
IDubai iphuhlisa isicwangciso sendalo esingqongileyo esiyakuqinisekisa ukuba ukukhula kunye nenkqubela phambili kuyenzeka ngelixa ukhusela indalo. Ukulawulwa kombane kwicala elifanelekileyo kuya kudlala indima, njengoko kuya kwanda ukuthuthwa kwabantu.
I-Emirate enkulu ye-UAE, u-Abu Dhabi, usebenze ngaphezulu kwe- $ 15 yezigidigidi kwiinkqubo zamandla ahlaziyekayo. I-Masdar Initiative igxininisa ukuzibophelela kwamawele kubume behlabathi kunye nokwahluka kuqoqosho lwe-UAE. Iphulo leMasdar ligxile kuphuhliso kunye nokuthengiswa kwetekhnoloji kumandla ahlaziyekayo, ukusebenza kakuhle kwamandla, ukulawulwa kwekhabhoni kunye nokwenza imali, ukusetyenziswa kwamanzi kunye nokuchithwa.
Amaqabane okuQala aquka ezinye zeenkampani ezinkulu zamandla kwihlabathi kunye namaziko abalulekileyo: i-BP, iShell, i-Petroleum esetyenzisiweyo, ukuHlola okuPheleleyo kunye neMveliso, uMbane Jikelele, iMitsubishi, iMitsui, iRoll Royce, i-Imperial College eLondon, MIT kunye neWWF. Inezinto ezine eziphambili: Iziko lokuvelisa izinto ezintsha ukuxhasa ukubonakaliswa, ukuthengiswa kunye nokwamkelwa kweeteknoloji zamandla ezizinzileyo. Iziko leMasdar lezeNzululwazi nobuChwepheshe elineenkqubo zokuthweswa izidanga kumandla ahlaziyekayo kunye nokuzinza, zibekwe kwisiXeko saseMasdar, isixeko sokuqala sekhabhathi engenasiseko, inkunkuma engenazixhobo, engenazithuthi. Inkampani yophuhliso igxile kurhwebo lokuncitshiswa kokukhutshelwa, kunye nezisombululo zeMicrosoft Development Mechanism njengoko inikezwe yiKyoto Protocol. Indawo eKhethekileyo yezoQoqo yokusingatha amaziko atyale imali kubuchwepheshe bamandla ahlaziyiweyo kunye neemveliso.
Umgaqo-nkqubo we-UAE wamandla
I-UAE kudala ingumthengisi obalulekileyo wamandla kwaye ngoku iba ngumthengi ofanelekileyo ofanelekileyo wamandla ngokunjalo. Kwiinzame zakhe zokukhawulezisa ukuphuculwa kolondolozo lwe-hydrocarbon eyongezelelweyo nakwimizamo yayo yokufaka isandla kuphuhliso kunye nokuphunyezwa kwemithombo yamandla, i-UAE inethemba lokuqhubeka nesiko layo elide lokuphatha amandla.
Ukulondolozwa nokukhuseleka kokusingqongileyo kwe-UAE ngomnye wemisebenzi ebinzima esijongene nayo ukuza kuthi ga ngoku. Amaqondo obushushu aphezulu kunye nemvula ephantsi kudala iimeko ezinzima, zifuna uhlengahlengiso olukhethekileyo kwizilwanyana nakwizityalo ukuze ziphile. Nokuba utshintsho oluncinci lwemozulu lunokuba nefuthe elibi kwindalo ye-UAE. Ukongeza, umda wonxweme olusezantsi uthetha ukuba kwanokunyuka okuncinci komgangatho wolwandle kunokuba nefuthe elibi kwindawo yonxweme, apho uninzi lwabemi belizwe luhlala nalapho uninzi lophuhliso olucwangcisiweyo lwenzeka. Ewe, izifundo zesayensi zifumana imiqondiso yokuba inqanaba lolwandle kwi-Gulf isenokuba sele likhuphuka.
Abemi bakhule bejikeleze i180,000 kwi1968 ukuya kuthi ga kwizigidi ezintlanu namhlanje. Ngenxa yoko, isixa somhlaba osetyenziselwa ukuhlala, ukuthengisa kunye nokusetyenziswa kwemizi-mveliso sonyuke kakhulu. Ukuhlaziywa kwakhona kunye Uphuhliso luphinde lwabumba i-UAE kunxweme ngexesha elifutshane kakhulu. Ulwandiso lwezibonelelo ze-Federation ngendlela yeezikhululo zeenqwelo moya, amazibuko kunye neendlela eziphezulu kuthathe indawo eyongeziweyo kwinto eyayikade iyindawo yendalo, ngelixa ilitye elixabisekileyo lokwakha libe nefuthe elikhulu kuninzi lweeNtaba zeHajar.
Ngaphandle kweenguqu eziguqukayo, Urhulumente uzibophelele ekugcinweni kwendalo kunye nokufikelela ngokulinganayo phakathi kokhuseleko lokusingqongileyo kunye neemfuno zophuhliso.
Umphathiswa wesebe lezendalo kunye namanzi, kunye neearhente zasekhaya- ezona zisebenzayo yi-Arhente yokusiNgqongileyo u-Abu Dhabi, noxanduva lokuphantse isine kwishlanu sendawo yomhlaba we-UAE-baqhubekile nokusebenza kwiinkqubo ezisebenzayo zophando lwezesayensi kunye nolungiselelo. kunye nokuphunyezwa kwemigaqo esisikhokelo kunye nezikhokelo.
Iphulo lezemfundo lenzelwe ngoncedo lwemibutho engekho phantsi kukarhulumente efana ne-Emirates Wildlife Society (EWS) ukukhulisa uluntu ngesidingo sokukhusela indalo nokunciphisa ukusetyenziswa kwamandla namanzi.
Indawo eKhuselekileyo yeLwandle iYasat, kunye ne-dugongs ezisengozini, yandiswa ukuba ibandakanye ezinye iziqithi ezininzi, kwaye ngoku igubungela ummandla ophantse ube ziikhilomitha zesikwere ze-3000. I-EWS kunye noMasipala waseFujairah babhengeze i-Wadi Wurrayah indawo ekhuselekileyo. Ikhaya elisesichengeni seArabhiya esisengozini, le ndawo yokuqala yeentaba ye-UAE.
Ulondolozo lwamanzi acocekileyo kunye nemithombo yolwandle nayo iphezulu kwi-ajenda ye-UAE, ngelixa ungcoliseko lomoya olunxulunyaniswa nokuxutywa kwamatye kunye nokwenziwa kwesamente kukhokelele ekuvaleni indawo ethile eRa-al-Khaimah naseFujairah.
Ukongeza, i-Federation yasebenze iminyaka emininzi kunye namanye amazwe ngesivumelwano sesivumelwano sokukhusela izilwanyana ezithile, njenge-houbara bustard, ezalela kumbindi we-Asiya kodwa ifudukela kwi-Arabia Arabia. I-UAE ngoku sele ikhethwe njengeNdlunkulu yesivumelwano esitsha sezizwe ngezizwe malunga nolondolozo kunye nokukhuselwa kweentaka ezifudukayo zeentaka ezixhoba iYurophu, IAfrika kunye neAsia.
Imidiya kunye neNkcubeko
I-UAE yintliziyo yorhwebo yecandelo leendaba laseMbindi Mpuma, esebenza njengehabhu yommandla kwiinkampani zeendaba zamanye amazwe nanjengendawo evundileyo yokuphuhlisa amashishini eendaba asekhaya. Icandelo elikhulayo ngokukhawuleza lijongwa liBhunga leMithombo yeendaba yeSizwe, elinoxanduva lokukhupha iilayisensi zeendaba, ukunyanzelisa imithetho yeendaba, kunye nokuqhuba isebe lolwazi lwangaphandle kunye ne-Emirates News Agency, i-WAM.
Elinye lawona mabandla makhulu eendaba kwilizwe liphela yi-Abu Dhabi Media Company, engumnikazi wejelo likamabonakude, uthungelwano lwezikhululo zikanomathotholo, inani lezinto ezipapashiweyo (Iphephandaba iAl Ittihad, Iphepha-ndaba likazwelonke, iphephandaba laseZahrat Al Khaleej kunye nemagazini eyiMajid. ) kunye namanye amashishini amaninzi ahambelana nemithombo yeendaba, kubandakanya i-Imagenation yophuhliso lwefilimu, I-United Printa Press kunye ne-Live.
Imimandla yasimahla isisixhobo kuphuhliso losasazo, i-CNN iseke indawo yokubhengezwa kweendaba kwindawo entsha ye-Abu Dhabi ye-Twofour54 ye-media eye yatsala uninzi lweengcali zeendaba. IDubai Media City ngoku ine-1200 ebhalisiweyo yamashishini anje nge-CNN, i-BBC, i-MBC kunye ne-CNBC. Eli lelinye lamaqela eendawo zemithombo yeendaba zasimahla eziqhutywa yiTecom, kubandakanya iDubai Internet City, iDubai Studio City kunye neZizwe ngeMithombo yeendaba yeHlabathi. Le mimandla incediswe ngokuphuhliswa kwemimandla emincinci yamajelo osasazo anjengeFujairah isiXhiba seDolophu kunye neRAK Media City.
Ukuveliswa kwemiboniso bhanyabhanya, kumgangatho wamanye amazwe nakumakhaya, kuyakhuthazeka, kwaye kuyaxhaswa yimibutho eliqela, kubandakanya iDubai Studio City, twofour54, Igunya le-Abu Dhabi leNkcubeko kunye neLifa leMveli (i-ADACH), isangqa kunye neFilimu ka-Abu Dhabi Ikhomishini.
Iincwadi, kubandakanya ukuguqulelwa kwemisebenzi ephambili kwisi-Arabhu, kunye nokukhuthazwa yimibutho efana neKitab neKalima. Iimpawu eziphambili zabapapashi beencwadi ezibanjelwe e-UAE zibandakanya iSharjah International Book Fair esele iqinisekisiwe kunye ne-Abu Dhabi International Book Fair, ngelixa elona bhaso likhulu loncwadi yiMbasa yeBhaso leZiko laseShayina, eya kuPedro Martinez Montavez kwi2009.
I-Dubai Press Club iququzelela, phakathi kwezinye izinto, iQonga leMithombo yeendaba yaseArabhu, kwaye ibambe amabhaso amaArabhu eArabicism, ngoku ikunyaka wayo wesibhozo kwaye ibandakanya iindidi ezilishumi elinambini.
Ilifa lenkcubeko kunye nenkcubeko ziphambili kubungqina belizwe, kwaye i-UAE yenza imizamo emininzi yokugcina inkcubeko yayo yesiqhelo. Kwangelo xesha, i-Shirikisho lifumana ukuvuselelwa kwenkcubeko, kugxininiswa ngakumbi kutyalo-mali lwezixhobo ezikumgangatho wehlabathi kunye nokwakhiwa kweebhulorho phakathi kweMpuma neNtshona.
Icandelo loMphathiswa Wezenkcubeko, ulutsha kunye nophuhliso loLuntu lisebenza kule mimandla, lidala amathuba okuba i-Emirates eselula ithathe inxaxheba kwinkcubeko, kubuhlakani, kwimidlalo nakwezolonwabo, ngelixa ikwakhuthaza abemi abadala ukuba bathathe inxaxheba njengabacebisi, bagqithisele ulwazi lwenkcubeko yabo Isizukulwana esincinci.
Ukuncedisa ukukhuthaza umbulelo kumculo, i-ADACH iququzelela iminyhadala yomculo, kubandakanya ne-Abu Dhabi Classics, eyayibambe ibala laseMpuma Mpuma kwiNew York Philharmonic kwi2009. Umnyhadala womculo we-WOMAD kwihlabathi liphela sele ubanjelwe e-Abu Dhabi. Ukongeza, uthotho lweekonsathi ezinomxholo othi 'Dubia Sound City' zenze impembelelo enkulu kwi-2009. Ngokuphathelele kubugcisa obubonwayo, ekuqaleni kwe-2009 umboniso we-'Emirati Expression 'wabonakalisa amagcisa asibhozo anesixhenxe, ukusuka ekupeyintini veteran ukuya kwisizukulwane esitsha sabathathi beefoto, abayili bemifanekiso, ividiyo nevidiyo yokufaka. Ngeli xesha, i-Sharjah Biennial, Art Dubai, Art Fair kunye neminye imiboniso emininzi yabanjwa ngokubambisana namahlakani afana ne-Guggenheim Foundation, i-Louvre, iYunivesithi yaseNew York i-Abu Dhabi, kunye neYunivesithi yaseParis-Sorbone Abu Dhabi. Ubugcisa bexeshana bukwabonakaliswa kakuhle kwimidlalo yegalari yonke e-Emirates.
Phakathi kwamanyathelo aphambili enkcubeko yamazwe nguMphathiswa Wezenkcubeko, ulutsha kunye nophuhliso loLuntu apha enyakeni yayingumbutho wepaseji yokuqala ye-UAE eVenice Biennale. Eminye imisebenzi phesheya kolwandle ibandakanya umnyhadala weveki ye-'AE yeNkcubeko 'e-Berlin kunye nomboniso we-Emirati-waseJamani eHuamburg, apho elinye iphulo le-Ministry, iprojekthi ye'Dialogue of Cultures' nayo yaphehlelelwa.
Kwinkcubeko ebanzi yenkcubeko, amaziko olondolozo lwembali akumgangatho wehlabathi anjengeGuggenheim Abu Dhabi, uLouvre Abu Dhabi, kunye noMyuziyam weSizwe weShayina aphantsi kophuhliso. Okwangoku, iSebe laseMazantsi laseSharjah elime ngokuzinzileyo longamela amaziko olondolozo lwembali alishumi elinesixhenxe kunye namaziko enkcubeko, kubandakanya imyuziyam entsha yempucuko ye-Islamic.
Abantu kunye noMbutho
Umnqweno wokuphucula umgangatho we Philayo Yabantu bayo kunye nentlalo-ntle yoluntu ngokubanzi iqhubele phambili umgaqo-nkqubo karhulumente - kungekuphela nje kuphuhliso loqoqosho, kodwa nakwimicimbi yezentlalo. Kwiminyaka embalwa emfutshane, iinguqu ezinkulu zentlalo zenzekile kuluntu olwalusakuba ngobuzwe; yimpumelelo emangalisayo, ngaphandle kokuphazamiseka okubonakalayo, ukuba i-UAE yindawo ekhuselekileyo nezinzileyo, evulelekileyo nenenkqubela phambili, eyaziwayo ekunyamezeleni, ubuntu nemfesane.
Iinzame zikarhulumente zokuncedisa uluntu kwinkqubo yotshintsho luye lwasekwa ngumgaqo-nkqubo, owasekwa e-2009, ukuba iintshumayelo kwimithandazo yangoLwesihlanu kuzo zonke iindawo zediski ye-Federal kufuneka igxile kwindima nakwimfundo yenkolo hayi kwezenkolo kuphela. Izihloko zibandakanya indlela yokukhulisa abantwana, amalungelo abantu basetyhini kunye nokubaluleka kokusebenza, indawo yelizwe kunye nokunyamezelana.
Umgaqo-nkqubo woluntu wentlalo uye wasebenza, njengoko oko kungqinwa kukudweliswa kwi-UN Human Development Index (HDI), ejonge ngaphaya kwe-GDP kwinkcazelo ebanzi yokuphila. Phakathi kwe-1980 kunye ne-2007, i-UAE HDI inyuke nge-0.72 ipesenti rhoqo ngonyaka, kwaye namhlanje yi-0.903, inyuka isuka kwi-0.743. Oku kubeka i-Federation ingamashumi amathathu anesihlanu kumazwe e-182 apho idatha ikhoyo-ukufumana indawo ye-UAE kuluhlu lwamazwe anamanqaku aphezulu wophuhliso lomntu.
Nangona kunjalo, ukukhula kwe-Federation ngokukhawuleza kwabemi kuzisa imingeni yoluntu. Ukuphela kwe-2009, inani labemi be-UAE liqikelelwa ukuba li-50.6 yezigidi, ukusuka kwi-4.76 yezigidi kwi-2008, okanye ukukhula kwenqanaba lokujikeleza nge-6.3 ipesenti; umgangatho wokukhula kwabemi bendawo uqikelelwe kwiipesenti ze-3.4 kwi-2009. Nangona kunjalo, ngaphandle kokunyuka okukhawulezayo, i-UAE igcine isikhundla sayo njengelinye lamazwe atyebileyo ngokwe-GDP ngengeniso ye-capita, eqikelelwa kwi-Dh195,000 (i-US $ 53,133.5) ekuqaleni kwe-2009; okwesibini kuphela ukuya kwiQatar kwilizwe lama-Arabhu.
Intsapho ihlala ililitye lembombo kuluntu lwe-UAE. Namhlanje, imiba yezentlalo noqoqosho inokuba ngumngeni nakwabo bazinikele kakhulu kumalungu osapho, kwaye urhulumente ubonelela ngenkxaso kwabo basweleyo, ngakumbi abantu abadala, abakhubazekileyo nabaqhawule umtshato. Ukongeza, uluhlu oluninzi lwemibutho yaseburhulumenteni nabangekho kurhulumente bayabandakanyeka kwiinkqubo zentlalo-ntle. Igunya elibomvu le-UAE Red Crescent, ngokwahlukileyo, yeyona ntlangano inkulu yesisa kweli lizwe, elawula iinkqubo zentlalontle, ezoqoqosho, ezempilo nezemfundo. Uncedo olusebenzayo lukwanikezelwa ngamaziko entlalontle aqhutywa yi-General Women Union.
URhulumente ukwabeka phambili iimfuno zezindlu zalapha ekhaya kwaye unenjongo yokwakha iindawo ezinamaziko afunekayo. Phantse i-17,000 ye-villas entsha ye-Emiratis iya kwakhiwa e-Abu Dhabi kule minyaka mihlanu izayo, kunye ne-50,000 kule minyaka ingamashumi amabini izayo. Uninzi lwezindlu kunye neeplati ziya kunikwa abahlali mahala. Inkqubo yezezindlu ye-Sheikh Zared, exhaswa ngurhulumente ukubonelela ngemali yenkxaso-mali kunye nemboleko-mali ye-UAE Uphines, iyaqhubeka nokwandisa imisebenzi yayo kwi-Emirates.
I-UAE ihlonipha ingqibelelo yabo bonke abantu abahlala kwi-Federation. Ukuzinikela kwabo ekuqinisekiseni ukulingana kunye nokusesikweni kwintlalo kubo bonke abemi okuqulathwe kuMgaqo-siseko. UmGaqo-siseko ukwacacisa inkululeko kunye namalungelo abo bonke abemi, ukuthintela ukuphathwa gadalala, ukubanjwa ngokungqongqo nokubanjwa, kunye nokuhlonipha inkululeko yenkululeko, kubandakanya inkululeko yokuthetha kunye neendaba, uxolo
indibano kunye nomanyano, kunye nokuqhelanisa neenkolelo zenkolo. Urhulumente uzibophelele ekuphuhliseni, ngendlela eyakhayo, imigaqo-nkqubo yeSibhengezo samaLungelo esiNtu kwaye uzimisele ukuphucula ingxelo yakhe yasekhaya ngokuzisa eyakhe imithetho kunye nezenzo ngomhla. Oku kuhambelana nelifa lenkcubeko le-UAE kunye neenkcubeko zenkolo, ezibandakanya ubulungisa, ngokulinganayo nokunyamezelana.
Kwinqanaba lamazwe aphesheya, i-Federation lityikityo lesivumelwano seNgqungquthela yokupheliswa kocalucalulo ngokuchasene nabasetyhini, ingqungquthela yamalungelo omntwana, ingqungquthela yabasebenzi yezizwe ngezizwe kwi-Minimum Age, kunye neNgqungquthela yamaLungelo aBantu abaKhubazekileyo.
Kwinqanaba likazwelonke, i-Federation lityikityo lesivumelwano seNgqungquthela yokupheliswa kocalucalulo ngokuchasene nabasetyhini, ingqungquthela yamalungelo abantwana, ingqungquthela yabasebenzi yezizwe ngezizwe yobudala obuncinci, kunye nesivumelwano samalungelo abantu abakhubazekileyo.
Kwinqanaba likazwelonke, isicwangciso sikarhulumente sijolise ekuqinisekiseni uphuhliso oluzinzileyo kwilizwe lonke kunye namanyathelo akhuthaza ukuxhotyiswa kwabasetyhini kunye nophuhliso lwemfundo ekumgangatho ophezulu kunye neenkqubo zempilo, kunye nokwenziwa kwamalungu oluntu abaneemfuno ezizodwa kunye namanye amaqela abuthathaka. inkqubo yophuhliso.
Ngokuphathelele kwimicimbi yezabasebenzi, i-UAE ijonge ukulawula nokulawula imeko yokusebenza ngokuhambelana nemithetho yamanye amazwe kunye neendlela ezilungileyo zokusebenza kwabezizwe. Kwenziwe iinzame zokuqinisekisa ukhuseleko lwabasebenzi, ukuqinisekiswa kwemivuzo kwangexesha kunye nokuphucula iimeko zokuhlala nezokusebenza, kunye nokuqinisekisa ukunyanzeliswa okungqongqo kwemithetho ukuze kuncitshiswe ukwaphulwa.
Ukulingana ngokwesini bekukho kwi-ajenda kaRhulumente ukusukela ekusekweni kwe-Federation, kwaye abasetyhini kwi-UAE kudala yamkelwa njengamaqabane alinganayo kuphuhliso lwesizwe. URhulumente uyaqhubeka nokulandela isicwangciso sokuxhobisa abantu basetyhini kwinkcubeko, kwezentlalo nakwezoqoqosho. Ngenxa yoko i-UAE ibekwa kwindawo yamashumi amathathu anesibhozo kwi-2009 UN Development Report ejongene neLungu leSizwe- umzobo obeka phakathi kwezizwe ezikumgangatho uphakamileyo.
Abafazi base-UAE namhlanje bathatha inxaxheba kuwo onke amaziko karhulumente, kubandakanywa amasebe aphezulu, ezomthetho kunye nezomthetho, kwaye banandipha imisebenzi eyahlukeneyo. Ngapha koko, abafazi base-UAE ngoku benza i-66 ipesenti yabasebenzi becandelo loluntu, i-30 ipesenti yabo bakwizikhundla eziphezulu.
Bonke abantu base-UAE banandipha ukufikelela simahla kwimfundo yaseprayimari, eyasesekondari nakwimfundo ephezulu. Kule minyaka idlulileyo, icandelo lezemfundo lithathe into ebalulekileyo: uhlengahlengiso kunye nophuculo lubonisa inyathelo elibalulekileyo kwiinjongo eziqhubekekayo zophuhliso lwe-Federation, kwaye kwenziwa iinzame ezinkulu kwibhodi yonke yokuhlaziya ikharityhula kunye nokuqinisekisa ukuba izikolo neekholeji zivavanywa ngokufanelekileyo. kwaye ivunywe.
IMfundo eYodwa ifumana ingqwalaselo ehlaziyiweyo, kugxilwe kwi-2009 kudityaniso lwabafundi belizwe ukusuka kumaziko emfundo eneemfuno ezizodwa kwizikolo zikarhulumente eziqhelekileyo. Iseti entsha yemigangatho yezikolo zikarhulumente nezabucala ijolise ekuqinisekiseni ukuba izikolo ziyawuthobela lo mgaqo-nkqubo, kwaye izohlwayo ziya kufunyanwa ngokungamkelwa kwabantwana abaneemfuno ezizodwa.
Imfundo ekumgangatho wesithathu kwi-UAE nayo iyaqhubeka nokukhula ngokukhawuleza kunye notshintsho. Ikhampasi entsha yeZved University yakhiwa kwiihektare ze-75 kwisithili esiKhulayo soNyaka. IYunivesithi yase-UAE eseAl Ain ikwanazo nezicwangciso zokwandiswa okukhulu, kwaye ikhampasi entsha iyakhiwa. Amanye amaziko aphambili kwinqanaba lesithathu abandakanya iikholeji eziPhezulu zeTekhnoloji, iziko loqeqesho le-Etihad, iEmirates Avation College yeAerospace kunye neziFundo zeZifundo, iZiko le-Emirates leBhanki yezeMali kunye nezezimali, kunye neekholeji zikaEtisalat neyunivesithi.
Iiyunivesithi zamanye amazwe, ukusuka kwiParis Sorbonne ukuya kwiDyunivesithi yaseMichigan State, zimelwe kakuhle kwi-UAE. Inkampu ye-Abu Dhabi yeYunivesithi yaseNew York ivula ekwindla ye2010. Amanye amaziko abalulekileyo anikezela ngezifundo ezizodwa zibandakanya i-INSEAD, iYunivesithi yaseNew York yeFilimu, iSikolo sikaRhulumente saseDubai, iZiko lasePetroleum, kunye neMasdar Institute of Science and Technology.
Uncedo lwezempilo e-UAE lukwindawo yonke, kwaye ukhathalelo lwangaphambi nolwemva kwendalo luyahambelana namazwe ahambele phambili kwezoqoqosho. Ngenxa yoko, ixesha lokuphila ngokuzalwa kweminyaka ye-78.5 lifikelele kumanqanaba afanayo nalawo aseYurophu naseMntla Melika.
Ukuqaliswa kwe-inshurensi yezempilo enyanzelekileyo e-Abu Dhabi yokugxothwa kunye nabaxhomekeke kubo ngumqhubi ophambili kulwakhiwo lomgaqo-nkqubo wezempilo. Ukongeza, inyathelo lokudibana lijolise ekuqinisekiseni ukuba yonke i-Emirati kunye ne-expirriat elizweni iya kugutyungelwa yi-inshurensi yezempilo enyanzelekileyo phantsi kwesikimu esimanyeneyo.
Amaziko okhathalelo lwezempilo sele ekumgangatho ophakamileyo kwi-UAE, kwaye, nangaphandle kwemeko yezezimali, ukhathalelo lwempilo luhlala lujoliso kutyalo-mali, ngenani likarhulumente kunye neeprojekthi zabucala ezenziwayo e2009.
Amayeza othintelo kunye nempilo yoluntu athathelwa ingqalelo njengabalulekileyo kwimpilo yexesha elide yabemi abancinci be-UAE. Iingcali zokunyuka kwezifo ezininzi zendlela yokuphila kwiminyaka ezayo. Nangona izithintelo zenkcubeko zithotyelwa kancinci, zisachaphazela imiba enzulu njengomhlaza. Ukunyanzelwa kwee-mammograms kubafazi abaphakathi kweminyaka engamashumi amane anesithandathu kunye nesibhengezo sokutshaya esidlangalaleni kwiindawo zikawonke-wonke yimizekelo yeenzame ezenziwayo zokuphucula impilo yoluntu malunga noku. I-UAE ikwanamazinga esifo seswekile kunye nesifo sentliziyo, kwaye ikhupha izicwangciso zokujongana nale micimbi. Ukhathalelo lwempilo olusisiseko sesona sixhobo sibalulekileyo kumgaqo-nkqubo wezempilo woluntu, kwaye nokuthambisa i-UAE isebenza nzima ukuphucula.
Amagunya ezempilo oluntu e2009 acelwe umngeni sisifo somkhuhlane weehagu (H1N1). Nangona kunjalo, amaqela amathathu ezempilo amakhulu - iSebe lezeMpilo, iGunya lezeMpilo - i-Abu Dhabi kunye noGunyaziwe wezeMpilo wase-Dubai-batshintsha ngokukhawuleza nangokuchanekileyo kunyango lokuthintela, ulawulo lweentlekele kunye nolawulo lwezifo kunye nesicwangciso esisebenzayo sokulawula imeko .
I-UAE inenkonzo ebanzi, exhaswa ngemali ngurhulumente kunye necandelo lezempilo labucala elihluma ngokukhawuleza elinikezela umgangatho ophezulu wokhathalelo lwempilo kubemi. Kwiindawo ezininzi ze-UAE, ukuhanjiswa konakekelo lwezempilo kuphantsi kwenguqu ebalulekileyo.
Uninzi lwezifo ezosulelayo ezinje ngealariya, imasisi nepolomyelitis ebezikade zisisifo e-UAE ziye zapheliswa, ngelixa ukhathalelo lwangaphambi kwendalo nolwengasemva kokubeleka lusemngciphekweni namazwe aphuhlileyo: izinga lokufa kwabantu abatsha Uncitshisiwe kwi-5.54 nge-1000 kunye nokufa kweentsana kwi-7.7 nge-1000. Izinga lokusweleka koomama lihle laya kwi-0.01 kuyo yonke i-100,000.
Njengomphumo weli nqanaba liphezulu lokhathalelo kuwo onke amabakala enkqubo yezempilo, ulindelo lobomi ngokuzalwa e-UAE, kwiminyaka ye-78.3, lifikelele kumanqanaba afanayo nalawo aseYurophu naseMntla Melika. Ukuza kuthi ga ngoku, ukhathalelo lwempilo kwi-UAE, ubukhulu becala, ixhaswe ngurhulumente. Njengamanye amacandelo, oku kugxininiswa kuyavela kwaye ubudlelwane phakathi kukarhulumente nabucala buye babaluleke ngakumbi.
Umgaqo-nkqubo woluntu ugxile ekuphuhliseni imigaqo-nkqubo yombutho kunye nezomthetho esekwe kweyona misebenzi ilungileyo, ukuphucula amandla ezempilo abucala naworhulumente. Ukongeza, inyathelo lomgaqo-nkqubo woluntu liza kubeka izinto eziphambili ngokubaluleka kuphuhliso lweenkonzo zempilo kwicandelo.
Inguqu kuKhathalelo lwezeMpilo ku-Abu Dhabi
Ukuhanjiswa kokhathalelo lwempilo e-Abu Dhabi kuyaqhubeka notshintsho oluchaphazela bonke abathathi-nxaxheba: abaguli (abahlali kunye nabathumeliweyo), ababoneleli kunye nabo baxanduva lokucwangcisa, baqinisekisa umgangatho weenkonzo kunye nokuxhasa ngenkqubo yezempilo. Iinjongo eziphambili zeGunya lezeMpilo e-Abu Dhabi zezi:
Ukuphuculwa komgangatho wokhathalelo, oluhlala luqwalaselwa ngokuyintloko, ukukhuthazwa kusetyenziswa imigangatho yenkonzo engqongqo kunye neethagethi zentsebenzo yomntu wonke.
Yandisa ukufikelela kwiinkonzo, inika bonke abahlali ukufikelela kumgangatho ofanayo wokukhathalela kunye nokukhetha iinkonzo zononophelo zempilo ngaloo ndlela bekhuthaza ukugqwesa ngokhuphiswano lweentengiso zasimahla.
Ukutshintsha ukusuka kuluntu ukuya kubanikezeli babucala ngokukhuselekileyo nangokufanelekileyo ukuze ababoneleli babucala, kunokuba urhulumente, iinkonzo zempilo zonakekelo, ngendima kurhulumente othintelwe kuphuhliso kunye nokunyanzeliswa kwamanqanaba amatsha okhathalelo lwempilo olukumgangatho wehlabathi.
Sebenzisa imodeli entsha yokuxhasa ngemali ngenkqubo entsha ye-inshurensi yezempilo.
I-inshurensi enyanzelekileyo kubo bonke abasebenzi, kubandakanywa nezasekhaya, ixhaswa ngabaxhasi. Isicwangciso esinyanzelekileyo se-inshurensi yezempilo yabasebenzi becandelo labucala, njengoko similiselwe e-Abu Dhabi, siza kusebenza kwilizwe liphela kwi2008. Iimpawu eziphambili zenkqubo entsha zibandakanya inkqubo yokubuyisa ngokucacileyo nangokucacileyo, ukufikelela okufikelelekayo kubo bonke abahlali kunye nenkxaso-mali ethembekileyo yokufumana ukhathalelo lwempilo olusemgangathweni e-Abu Dhabi.
Ingxowa-mali yesisa iya kuqhubeka nokusebenzela abagxothiweyo abangasasebenziyo kwaye ihlawula iimeko zonyango ezinzulu ezinje ngomhlaza, idayali, ipolytrauma kunye nokukhubazeka.
Inkqubo entsha ye-inshurensi yezempilo emanyeneyo eDubai yesizwe kunye nabangengobemi nayo icwangcisiwe kwaye kulindeleke ukuba le nkqubo ekugqibeleni idluliselwe kwilizwe liphela.
I-United Arab Emirates yenye yezona ndawo zikhula ngokukhawuleza kubakhenkethi kunye namashishini. Ukwamkela iindwendwe kwama-Arabhu kunye namaqondo obushushu obusika afanelekileyo axhotyiswa ziziseko zentengiso kunye nezinto ezikumgangatho wehlabathi.
I-UAE ikwayindawo enembeko yehlabathi kwiinkomfa, imiboniso yommandla kunye neyehlabathi jikelele kunye neminyhadala yemidlalo yehlabathi jikelele efana neDubai yeNdebe yeHlabathi yokubaleka ihashe, i-Abu Dhabi formula One Grand Prix, iDubai Desert Classic Golf Championship, iFIFA Iklabhu yeNdebe yeHlabathi, imibhiyozo yefilimu ekumgangatho wehlabathi eDubai kunye nase-Abu Dhabi, nangokudibana ne-White House, ingqungquthela yezoqoqosho yabanini bamazwe. I-UAE iphumelele ibhidi yokusingatha i2020 World Expo.
I-arhente enkulu ye-Intanethi yokuhamba kwi-intanethi, i-expedia.co.uk, ikhethe u-Abu Dhabi njengenye yeendawo eziphambili ze-10 zokuhamba kwihlabathi kwi-2008. Isikhululo senqwelomoya saseDubai siphumelele ibhaso lesikhululo seenqwelomoya esise-Middle East kwii-2012 World Travel Awards.
Kuninzi ekufuneka kwenziwe e-UAE ngaphaya kweDubai kunye ne-Abu Dhabi. Kuqala ukuzinza ngexesha leBronze Age, iSharjah yimali eyinkcubeko ye-emirates. Indawo yeLifa leSixeko eSharjah City ibandakanya iMyuziyam yaseMartha, iMyuziyam yamaSilamsi kunye neemyuziyam zobugcisa bemveli kunye nexesha lethu, phakathi kwabanye abaninzi.
IA Ajman itsa umdla kubakhenkethi bamanye amazwe kwiilwandle ezintle, njengoko kwenza iFujairah ekwabonelela ngokuntywila kunye nokuntywila kunye neendawo zokundwendwela kwiPeninsula yaseMusandam, edume ngendalo engasetyenziswanga ngamawa ayo amdaka, amalahle anamatye kunye neekorale.
IRas Al Khaima, kumda ne-Oman, mhlawumbi waziwa kakhulu kubahambi bendawo abahamba uhambo lweNtaba yeHajjar.
I-Visa / ipasipoti yokuHamba ukuya e-UAE
I-1) Ulwazi ngokubanzi
bonke Ma Indiya kunye Indian iipasipoti ezisebenzayo ezingaphezu kweenyanga ezintandathu zinokungena kwi-UAE.
I-2) Visa kwiiplanethi kunye nakwiipasipoti ezisemthethweni
I-Ambassadors ikhupha ii-visa kwiiDiplomatic nakwiiPassports ezisemthethweni kuphela. Amaxwebhu ayimfuneko koku:
I-Verbale evela kwi-Indiya yoMphathiswa Wezangaphandle (kwimeko yamaGosa kaRhulumente waseIndiya) okanye kwi-Ofisi yozakuzaku echaphazelekayo (kwimeko yoonozakuzaku okanye amagosa asebenza kwi-diplomatic Mission) .Umhla wokungeniswa kwe-ver verbale kufuneka ubengaphakathi kwenyanga enye umhla wokukhutshwa kwayo.
Ifom yesicelo echwethezwe kwiileta ezinkulu
Nga pheleli ivisa Ifom yesicelo ayizukukonwabisa.
Ifomu yesicelo se-Visa kufuneka isayinwe ngumenzi-sicelo kwisithuba esityunjiweyo sokutyikitywa kwakhe.
Iinkcukacha zeSponsor kwi-UAE ziyimfuneko eyimfuneko.
Umgaqo-siseko. Amagosa kufuneka akhankanye Iinkcukacha zeSponsor njenge-Embassy okanye iOfisi yabo kwi-UAE, ngenjongo yokuNgena kunye neDilesi epheleleyo.
Ikopi yencwadana yokundwendwela enombala (iphepha legama, igama lomntu kunye nomhla wokuphelelwa) kunye ne-Coverpage (umbala).
Ifoto enye enemibala yepaspoti (eya kudluliselwa).
I-3) Visa yabakhenkethi yokuHamba kwi-UAE
I-Ambassum yase-UAE ayizikhuphi ii-visa zokundwendwela eziqhelekileyo.
I-visa yabakhenkethi yeLizwe lamaIndiya, ebambe ipasipoti eqhelekileyo, ilungiselelwe ngumxhasi kwi-UAE. Isenokufumaneka xa ubhukisha ihotele e-UAE okanye kwiOfisi yeenqwelo moya yase-Emirates okanye kwiOfisi ye-Air Arabia okanye kwiArhente yokuHamba e-India.
I-4) Ukucinywa kweVisa
I-Ambassum yase-UAE ayizukucima ii-visa.
Ukwenzela ukuba icinywe i-visa yakho, kufuneka uqhagamshelane nomxhasi wakho kwi-UAE ebikuhlelele i-visa. Umxhasi wakho unegunya lokucima i-visa yakho yangaphambili. Ngaphandle kokufumana ukuba i-visa yangaphambili irhoxisiwe, awunakufumana i-visa entsha ye-UAE kwaye awukwazi ukuya e-UAE.
Inkqubo yokulahleka kwepasipoti, equkethe i-visa evumayo yokuhlala ye-UAE.
Kwimeko yokulahleka kwepasipoti yaseIndiya equkethe iVisa Indawo yokuhlala yase-UAE, la maxwebhu alandelayo kufuneka angeniswe kwi-Embassy Counter:
Ilahleko yokugcwalisa ngokugqibeleleyo yePasipoti yencwadana yokundwendwela (kwiTayitile yeeleta eyinkunzi), kunye neenombolo ezimbini zomfakisicelo (ezantsi kwifom).
Ikopi emibala emitsha yepasipoti.
Ikopi enemibala ye-UAE Residence Visa.
Ileta evela kumxhasi kwi-UAE, echaza ukuba umenzi-sicelo ushiye i-UAE ngemvume yakhe.
Ikopi yeNgxelo yamaPolisa asekuqaleni okanye iFOD ngesiNgesi, engqinwa liCandelo leMicimbi yezangaphandle ye-Indiya (Umhla wokukhutshwa kwe-MOTA kufanelekile ngaphambi komhla wokukhutshwa kwepasipoti entsha).
Uguqulelo lwe-ARABIC lengxelo yamapolisa yepaspoti elahlekileyo kunye nesitywina soMguquleli wesiArabhu.
Ubungakanani bePasi elinye lokuHamba.
Intlawulo ye-Dh 300 / -.
Nje ukuba la maxwebhu angeniswe kwi-EUE Embassy Counter, umenzi-sicelo uya kwaziswa xa imvume yokungena sele ilungile.
Ukuxhonywa / ukukhutshwa ngokusemthethweni kwamaxwebhu
I-1) Ukunyanzelwa / ukuqinisekiswa ngokusemthethweni kwamaxwebhu
Abantu banokungenisa amaxwebhu abo e-OWN, okanye amaxwebhu oLWABIWO-MALI WABO, ekuboniseni ubungqina besazisi kunye nobungqina boManyano. Amaxwebhu abahlobo bakho angeniswa KUPHELA ngabo nabaphi na abameli abagunyazisiweyo.
Amaxwebhu orhwebo angangeniswa ngokuthe ngqo yiNkampani egunyazisiweyo-Abasebenzi. Ileta egunyazisiweyo kwileta yeNkampani (enegama loMqeshwa kunye neTywina leNkampani) kunye nesazisi seNkampani siyimfuneko kweli tyala.
I-2) Amanyathelo oKuthengiswa / ukuSebenza ngokusemthethweni kwamaxwebhu
Onke amaxwebhu kufuneka angqinwe kuqala liCandelo le-Consular Ministry le-Ofisi yezeMicimbi yezangaphandle e-India, emva koko liCandelo le-Consular, Vasant Kunj, eNew Delhi. Nceda uqaphele ukuba amaxwebhu emfundo kufuneka angqinwe nguMphathiswa Wezemfundo welizwe elichaphazelekayo ngaphambi kobungqina 'beemicimbi yangaphandle'. Ngokungqinwa kobungqina kwiCandelo le-Consular, i-UAE Dirham 156.06 yimali ehlawulelwayo kwaye amaxesha yi-9: 00 AM ukuya kwi-2: 00 PM, ngoMvulo ukuya ngoLwesine, kunye ne-9: 00 AM ukuya kwi12: 00 PM ngolwesiHlanu. Olu xwebhu lunokuthathwa kwangolo suku olunye, phakathi kwe-3: 00 kunye ne-4: I-00 PM, ngoMvulo ukuya ngoLwesine, kunye ne-2: I-30 PM ukuya kwi-3: 30 PM ngolwesihlanu. Malunga nayo nayiphi na imibuzo, nceda usithumelele i-imeyile kule dilesi: consular@uaeembassy-newdelhi.com
Ezinye izatifikethi ezinje ngoMtshato, ukuBala, amava, ii-Afidavithi, IIMOTI zencwadana yokundwendwela elahlekileyo, amaxwebhu orhwebo, njl njl. Kufuneka ziqinisekiswe liCandelo loMphathiswa Wezangaphandle. Inkqubo eseleyo iya kuhlala ifana. Umrhumo wamaxwebhu entengiso uxhomekeke kumcimbi kunye nentlawulo ye-invoice iyahluka ngexabiso le-invoice. Nceda uqhakamshelane necandelo le-Consum yase-UAE kwiimeko apho unemibuzo.
I-3) Imirhumo yokuJongwa kwamaXwebhu
Imirhumo kwi-UAE Dirham
Uxwebhu lwezeMfundo (idiploma, iidigri, izatifikethi zesikolo)
Isatifikethi sokurhweba kuZwelonke
Amadigri kunye nezatifikethi
Isatifikethi sokufunda umsebenzi
IMOTO yokulahleka kwepasipoti
Amandla eGqwetha (elomntu)
Isatifikethi sohlalutyo lweziyobisi
Isatifikethi sobhaliso lwabahlengikazi
Isatifikethi seMilo yamapolisa
Isatifikethi sokufumana indlalifa
Ikopi yelayisensi yokuqhuba, ipasipoti, njl.
Imirhumo yexabiso le-invoice ngexabiso le-invoice
I-4) Amaxwebhu orhwebo
Ukuqina kwezinto phakathi kwabantu, ngelixa kuvulwa inkampani
Ukujolisa ngokuthatha imveliso, xa kuthengiswa ngaphakathi
Ukujolisa ngokuthatha imveliso, xa kuthengiswa ngaphandle
Amandla egqwetha lokuvula ishishini ngaphakathi kurhulumente.
Ukutshintshwa kwemali eyabelweyo.
Ukwaziswa kweqabane elitsha.
Vula isebe elitsha lenkampani yelizwe langaphandle.
Vula uhlobo olutsha lwenkampani yamanye amazwe engaphandle kwe
Iphepha-mvume Lokushishina (apho iikopi zisasazwa kumazwe angaphezu kwelinye ukuze zivule isebe kulo lonke ilizwe).
Ukufezekiswa kweeprojekthi esele zikhona
ukugqitywa kwecandelo ngalinye,
ngaphakathi elizweni okanye ngaphandle kwelizwe.
Uhlahlo-lwabiwo mali lweenkampani
Uhlahlo-lwabiwo mali lwezezimali ngonyaka
Ubhaliso lweelayisensi zabakhenkethi
Iiarhente zoRhwebo (zabucala / zikaRhulumente)
Ukukhutshwa kweelayisensi, ukuqeshwa kweCandelo umlawuli,
Ukuvula i-Brnach, uLawulo lwee-Quotas
Cert. Kwamalungu eeKomiti zoRhwebo.
Imizuzu yeNtlanganiso yeBhodi yaBalawuli.
Imemorandam yoMbutho weNkampani.
Ikopi yayo nayiphi na arhente engqiniwe engqinisisiweyo.
Iintlawulo ziyaguquka nangaliphi na ixesha ngaphandle kwesaziso sangaphambili
I-5) Intlawulo yee-invoice
Isatifikethi sokuziphatha kakuhle
I-1) Ukufumana i-Fingerprints engqinwe kwi-UAE Cons Consor
Ukwenzela ukufumana isatifikethi sobupolisa emaphepheni kulo naliphi na i-Emirate ye-UAE, umgqatswa kufuneka afake iminwe yakhe engqinibeni nge-inki emnyama ngakwisikhululo samapolisa sendawo yesixeko sakhe, emva koko ke nguMphathiswa Wezasekhaya kwisebe lakhe kwaye ke nguMphathiswa Wezangaphandle. Imicimbi yeIndiya. Idilesi yeofisi yabo yeDelhi liCandelo laseCosta, iNdlu yePatiala, iTilak Marg, kufutshane neSango laseIndiya. Ezinye iiofisi zeCandelo loMphathiswa Wezangaphandle ziseChennai, Guwahati, Hyderabad naseKolkata. Umgqatswa angaya ngqo kwi-Fingerprint Cell e-Patiala House ukuze enze iminwe yakhe. Iiprinta zomnwe ezixhonyiweyo kufuneka zingeniswe kwi-Embassy ye-UAE (nokuba iyodwa, okanye izihlobo zegazi, okanye naphi na ngabameli bethu abagunyazisiweyo) ukusuka kwi-9: 00 am to 12: 00 pm, Monday to Friday. I-Rs.3,750 / - yimali ehlawulelwa isatifikethi kwi-CASH, kwaye uxwebhu olo lwaluya kubuyiswa kwangolo suku olunye, phakathi kwe3: 00 pm kunye 4: 00 pm.
I-2) Kuthunyelwa iminwe emiselweyo kwi-UAE
Nje ukuba ufumanise ubungqina beminwe obubuyisiweyo kwi-Arhente, kuya kufuneka ubathumele kwi-arhente efanelekileyo kwi-UAE. Nceda ufake ezi zinto zilandelayo.
Ifom yeminwe yeminwe esemthethweni ngummeli we-UAE
Ikopi yemvume yakho yangaphambili yokuhlala e-UAE
Ikopi yepasipoti yakho yamva nje
Iifoto ezimbini ezilingana ngemibala yepaspoti
Nayiphi na imali ehlawulwayo (ixhomekeke kulawulo)
Thumela ipakethi yakho kwiCandelo elichaphazelekayo le-arhente yezangaphakathi. Ngaphambi kokuba uthumele amaxwebhu, nceda utsalele umnxeba kwiOfisi ye-UAE ukuze ufumane ulwazi malunga nemirhumo efunekayo, kunye nokuqinisekisa ukuba ubathumela kulawulo olufanelekileyo.
Icandelo Jikelele loPhando lobugebenga
Iimvume kunye neZatifikethi Icandelo
Amapolisa ase Dubai Jikelele i-HQ
Ifowuni: 971-4-2013484 / 2013564
Ifeksi: 971-4-2171512 / 2660151
ISebe lamapolisa-Abu Dhabi
Indawo yewebhusayithi: http://www.adpolice.gov.ae
Indawo yeWebhusayithi: http://www.shjpolice.gov.ae
Sicebisa ukuthumela la maxwebhu kumhlobo kwi-UAE, ukuze umhlobo wakho afumane isatifikethi kwiCandelo lamapolisa egameni lakho. Oku kuya kunciphisa kakhulu ixesha lokulungisa xa kuthelekiswa nokuthumela amaxwebhu ngqo kwiCandelo lamapolisa.
Uluhlu loNyango oluKhawulezileyo kwi-UAE
Apha ngezantsi kunoluhlu lweeMedicine zoMayeza kunye neMedical Directed, ebhaliswe kwi-Ofisi yezeMpilo kwi-UAE kwaye inyanzeliswa yi-UAE Ministry of Interior and International Narcotic Controlled Board (INCB).
Eminye imibuzo ingabhekiswa kwi-UAE yeCandelo loLawulo lweZiyobisi lezeMpilo e-Abu Dhabi, kwi-PO Box 848, ifeksi: + 971 2 6313 742.
Olu luhlu lulandelayo lubonisa inombolo eqinisekileyo, igama lokurhweba, igama eliqhelekileyo kunye nefom yamayeza.
Itheyibhile ye1, 123 Cold Iitafile, iCodeine phosphate 8mg, Acetaminophen 325mg, Cafeine 30mg, Carbinoxamine maleate 3.06mg, Phenylephrine 5mg
I-2, i-XOSUMY 10mg, i-Aripiprazole 10mg, iitheyibhile
I-3, i-XOSUMY 15mg, i-Aripiprazole 15mg, iitheyibhile
I-4, i-XOSUMY 20mg, i-Aripiprazole 20mg, iitheyibhile
I-5, i-XOSUMY 30mg, i-Aripiprazole 30mg, iitheyibhile
I-6, YENZA i-linctus eyenzelwe, iCodeine Phosphate10mg, iTransrolidine1.25mg, I-Pseudoephedrine 30mg / 5ml, i-Linctus
I-7, DM EBONISWAYO, iDextromethorphan 10mg, iTransrolidine1.25mg, I-Pseudoephedrine 30mg / 5ml, i-Linctus
I-8, EYENZIWA, i-Estradiol kunye neNorethisterone, iitheyibhile
I-9, i-ADOL ebandayo, i-Dextromethorphan HBr 15mg, I-Pseudoephedrine HCL 30mg, iParacetamol 325mg, iiCaplets
I-10, I-ADOL Cold HOT THERAPY, Paracetamol 650mg, Pseudoephedrine HCL 60.0 mg, Dextrometorphan HBr 30.0 mg, Sachets
I-11, icandelo le-ADOL, iCodeine phosphate 10mg, iParacetamol 150mg, iCafeine 50mg, iSalicylamide 200mg, iitheyibhile
I-12, AKINETON 2mg, Biperiden HCL 2mg, Amacwecwe
I-13, AKINETON 5mg, Biperiden Lactate 5mg / ml, Inaliti
I-14, AKINETON RETARD 4mg, Biperiden HCL 4mg, Amacwecwe
I-15, ALGAPHAN, Dextropropoxyphene HCL 25mg Paracetamol 300mg, Amacwecwe
I-16, ALGAPHAN, Propoxyphene HCL 75mg Chlorobutanol 10 mg / 2ml, In sindion
I-17, ANAFRANIL 10, Clomipramine HCL 10 mg, Amacwecwe
I-18, ANAFRANIL 25, Clomipramine HCL 25 mg, Amacwecwe
I-19, ANAFRANIL SR 75, Clomipramine HCL 75 mg, Amacwecwe
I-20, kunye ne-AndriOL 40mg, iTestosterone undecanoate 40mg, iicaps
I-21, i-ANEXATE 0.5mg / 5ml, i-Flumazenil 0.1mg / ml, ithumba
I-22, i-ANEXATE 1mg / 10ml, i-Flumazenil 0.1mg / ml, ithumba
I-23, I-ARTANE 2, i-Benzhexol HCL 2 mg, Amacwecwe
I-24, I-ARTANE 5, i-Benzhexol HCL 5mg, Amacwecwe
I-25, i-ARTHROTEC 50, iMisoprostol 0.2mg Diclofenac sodium 50mg, Amacwecwe
I-26, I-ATIVAN 1, iLorazepam 1mg, iitheyibhile
I-27, AURIMEL, Carbinoxamine maleate 2mg, Dextromethorphan HBr 5mg, Phenylephrine HCL 5mg, Sodium citrate 325 mg / 5ml, Syrup
I-28, i-AURORIX 100, iMoclobemide 100mg, iitheyibhile
I-29, i-AURORIX 150, iMoclobemide 150mg, iitheyibhile
I-30, AURORIX 300, Meclobemide 300 mg, Amacwecwe
I-31, BARNETIL 200mg / 2ml, Sultopride 200mg / 2ml, In sindion
I-32, BARNETIL 400, Sultopride 400mg, Amacwecwe
I-33, BENZTRONE 5mg / ml, Oestradiol Benzoate 5mg / ml, In sindion
I-34, BEPRO, iPapaverine HCL 12.5mg, iCodeine Sulphate 125mg, iCalcium Iodide 1gm, Glycerine 5gm / 100ml, Syrup
35, BRONCHOLAR, Dextromethorphan HBr 7.5mg Guaifenesin 50mg, Ephedrine HCl 7.5mg, Chlorpheniramine maleate 1.25mg / 5ml, Udibaniso
I-36, i-BRONCHOLAR i-forte, i-Dextromethorphan HBr 15mg Ephedrine HCL 7.5mg, Guaifenesin 50mg, Chlorpheniramine maleate 1.25mg / 5ml
I-37, i-BRONCHOPHANE, i-Dextromethorphan HBr 125mg iDiphenydramine HCl 100mg, Ephedrine HCl 150mg, Guaifenesin 1gm / 100ml, Syrup
I-38, BUCCASTEM 3mg, Prochlorperazine Maleate 3mg, Amacwecwe
I-39, I-BUSPAR 10, iBuspirone HCL 10mg, iitafile
I-40, BUSPAR 30 mg, iBuspirone HCl 30 mg, iitafile zahlukile
I-41, I-BUSPAR 5, iBuspirone HCL 5 mg, iitafile
I-42, CAMCOLITE 250, iLithium Carbonate 250mg, Iitheyibhile
I-43, CAMCOLITE 400, iLithium Carbonate 400mg, Iitheyibhile
I-44, CANTOR 50, iMinaprine 50mg, iitheyibhile
I-45, CELLCEPT 250mg, Mycophenolate mofetil 250mg, iikhowudi
I-46, CELLCEPT 500mg, Mycophenolate mofetil 500mg, iikhowudi
I-47, CIPRALEX 10mg, i-Escitalopram (njenge-Escitlopram oxalate) 10mg / ithebhulethi, Iitheyibhulethi
I-48, i-Cipralex 10mg, i-Escitalopram, Ithebhulethi
I-49, CIPRALEX 15mg, i-Escitalopram (njenge-Escitlopram oxalate) 15mg / ithebhulethi, Iitheyibhulethi
I-50, i-Cipralex 15mg, i-Escitalopram, Ithebhulethi
I-51, CIPRALEX 20mg, i-Escitalopram (njenge-Escitlopram oxalate) 20mg / ithebhulethi, Iitheyibhulethi
I-52, i-Cipralex 20mg, i-Escitalopram, Ithebhulethi
I-53, CIPRALEX 5mg, i-Escitalopram (njenge-Escitlopram oxalate) 5mg / ithebhulethi, Iitheyibhulethi
I-54, CIPRAM 20, Citalopram 20 mg, Amacwecwe
I-55, CLIMEN, iMicronised Estradiol Valerate (pink) 2mg / 1tab, Micronised Estradiol Valerate (mhlophe) 2mg / 1tab, Micronised Cyproterone Acetate (Pink) 1mg / 1 tab.
I-56, ICOPOPOLOL 2, iZuclopenhtixol diHCL 2mg, Iitheyibhile
I-57, ICOPOPOLOL 25, iZuclopenhtixol diHCL 25mg, Iitheyibhile
I-58, CLOPIXOL -Acuphase 100mg, Zuclopenhtixol acetate 100mg / 2ml, Injection
I-59, CLOPIXOL Idepho ye-200, iZuclopenhtixol decanoate 200mg / ml, In sindion
I-60, CLOPIXOL Idepho ye-500, i-Zuclopenhtixol acetate 500mg / ml, In sindion
I-61, CLOPIXOL10, Zuclopenhtixol diHCL 10mg, Amacwecwe
I-62, CLOPIXOL-Acuphase 50mg, Zuclopenhtixol acetate 50mg / ml, In sindion
I-63, CODAPHED, Codeine phosphate 8mg Chlorpheniramine maleate 2mg, Ephedrine HCL 15mg / 10ml, Syrup
I-64, i-Codaphed Plus, iChlorpheniramine Maleate Ephedrine HCl, iCodeine Phosphate, Ammonium Chloride, Syrup
I-65, CODILAR, Dextromethorphan HBr100mg IPhenylephrine HCL 40mg, iChlorpheniramine eyindoda 20mg / 100ml, Syrup
I-66, CODIPRONT, Codeine 30mg, Phenyltoloxamine 10mg, Iicaphule
I-67, CODIPRONT, Codeine 11.1mg, Phenyltoloxamine 3.7mg / 5ml, Syrup
I-68, I-CODIPRONT Cum exp., I-Codeine 200mg, iGuaiphenesine 1gm, Phenyltoloxamine 66mg, Thyme ext. I-1gm / 100gm, iSyrup
I-69, CODIPRONT Cum exp., Ikhowudi 30mg, Phenyltoloxamine 10mg, Guaifenesin 100mg, Amacwecwe
I-70, i-CODIS, i-Aspirin 500 mg, i-Codeine Phosphate 8 mg, Amacwecwe
I-71, COLDEX-D, Dextromethorphan HBr 10mg, Pseudoephedrine HCl 30mg, Chlorpheniramine maleate 1.25mg, Glyceryl guaicolate 50mg / 5ml, Syrup
I-72, CYTOTEC, IMisoprostol 200mcg, iitheyibhile
I-73, DEANXIT, Flupentixol diHCL 0.5mg, Melitracene HCL 10mg, Amacwecwe
I-74, DECA DURABOLIN 25mg / ml, Nandrolone Decanoate 25mg / ml, In sindion
I-75, DECA DURABOLIN 50mg / ml, Nandrolone Decanoate 50mg / ml, In sindion
I-76, DEHYDROBENZ-PERIDOL, Droperidol 2.5mg / ml, In sindion
I-77, DEMETRIN 10, Prazepam 10mg, Iitheyibhile
I-78, DEXTROKUF, Dextromethorphan HBr 15mg / 5ml, iSyrup
I-79, DEXTROLAG, iDextromethorphan HBr 10mg, iGuaifenesin 100mg, Chlorpheniramine Maleate 2mg, Amonium chloride 25mg / 5ml, Syrup
I-80, DHC CONTINUS, i-Dihydrocodeine tartrate 60mg, Amacwecwe
I-81, DIALAG i-microclysma, i-Diazepam 5mg / 2.5ml, isisombululo
I-82, DIALAG i-microclysma, i-Diazepam 10mg / 2.5ml, isisombululo
I-83, i-DIAPAM 10, i-Diazepam 10mg, iitheyibhile
I-84, i-DIAPAM 2, i-Diazepam 2mg, iitheyibhile
I-85, i-DIAPAM 5, i-Diazepam 5mg, iitheyibhile
I-86, DIARSED, iDiphenoxylate HCL 2.5mg, Atropine sulphate 0.025mg, Amacwecwe
I-87, DIAXINE, iDiphenoxylate HCl 2.5mg, Atropine sulphate 0.025mg, Amacwecwe
I-88, i-DIAZEPAM 2, i-Diazepam 2mg, iitheyibhile
I-89, i-DIAZEPAM 5, i-Diazepam 5mg, iitheyibhile
I-90, i-DICTON ibuyise i-30, iCodeine 11mg, iCarbinoxamine 1.5mg / 5ml, iSyrup
I-91, DIPRIVAN 1% w / v, Propofol 1.00% w / v, IVni infusion
I-92, DIPRIVAN 2% w / v, Propofol 20mg / 1ml, IV infusion
I-93, DISTALGESIC, Propoxyphene HCL 32.5mg Paracetamol 325mg, Amacwecwe
I-94, DOGMATIL 100, Sulpiride 100 mg / 2ml, In sindion
I-95, DOGMATIL 25mg / 5ml, Sulpiride 25mg / 5ml, Isisombululo
I-96, DOGMATIL 50, Sulpiride 50 mg, Iikhowudi
I-97, i-DOGMATIL Forte, iSulpiride 200 mg, Amacwecwe
I-98, DORMICUM 15, Midazolam 15mg, Iitheyibhile
I-99, DORMICUM 15mg / 3ml, Midazolam 15mg / 3ml, Injection
I-100, DORMICUM 5mg / ml, Midazolam 5mg / ml, In sindion
I-101, DORMICUM 7.5mg, Midazolam 7.5mg, Amacwecwe
I-102, DORSILON, Mephenoxalone 200mg, Paracetamol 450mg, Iitheyibhile
I-103, i-EDRONAX 4mg, i-Reboxetine 4mg, iitheyibhile
I-104, i-EFEXOR 37.5, iVenlafaxine 37.5mg, iitheyibhile
I-105, i-EFEXOR 75, iVenlafaxine 75mg, iitheyibhile
I-106, i-EFEXOR XR 150, iVenlafaxine Hydrochloride 150mg, iicaps
I-107, i-EFEXOR XR 75, iVenlafaxine Hydrochloride 75mg, iicaps
I-108, i-ESTRACOMB TTS, i-Oestradiol 4mg, iNorethisterone acetate 30mg (Patch 1) + Oestradiol 10mg (Patch 2), iipatches
I-109, i-ESTRADERM TTS 100, i-Estradiol 8mg / 20cm2, iipatches
I-110, i-ESTRADERM TTS 25, i-Estradiol 2mg / 5cm2, iipatches
I-111, i-ESTRADERM TTS 50, i-Estradiol 4mg / 10cm2, iipatches
I-112, i-ESTROFEM, i-Oestradiol 2mg, iitheyibhile
I-113, I-ESTROFEMTETE, i-Oestradiol 4mg, iitheyibhile
I-114, i-FAVERIN 100, i-Fluvoxamine i-male man 100mg, iitafile
I-115, i-FAVERIN 50, i-Fluvoxamine i-male man 50mg, iitafile
I-116, i-FEMOSTON 2 / 10, i-Dydrogesterone (Y) 10mg, i-Estradiol (O) 2.0mg, i-Estradiol (Y) 2.0mg, iitheyibhile
I-117, i-FLEXIBAN, i-Cyclobenzaprine HCL 10mg / ithebhu, Iitheyibhile.
I-118, I-FLUANXOL 0.25, i-Flupenthixol 0.25mg, Iitheyibhile
I-119, I-FLUANXOL 0.5, i-Flupenthixol 0.5mg, Iitheyibhile
I-120, I-FLUANXOL 1, i-Flupenthixol 1mg, Iitheyibhile
I-121, I-FLUANXOL 3, i-Flupenthixol 3mg, Iitheyibhile
I-122, I-FLUANXOL Depot, i-Flupenthixol 20mg / ml, ithumba
I-123, i-FLUANXOL Depot, i-Flupentixol decanoate 100mg / ml, In sindion
I-124, I-DIVULE YOKUGQIBELA, I-Fluoxetine 22.4mg, Iicaphule
I-125, I-FLUNEURIN 20mg, iFluoxetin 20mg / 1capsule, Iicaphule
I-126, I-FLUTIN 20mg, i-Fluoxetine Hydrochloride 20mg, iicaphule
I-127, I-FLUXETYL 20mg, iFluoxetine (njengo-F. Hydrochloride) 20mg / ikhaphetshu,
I-128, FRISIUM 10, Clobazam 10 mg, Amacwecwe
I-129, FRISIUM 20, Clobazam 20 mg, Amacwecwe
I-130, GODINAL SODIUM, Phenobarbitone sodium 200mg / ml, In sindion
I-131, GENOTROPIN 16 IU (5.3mg), Somatropin 16IU / 1Cartridge, Powder for Inionion
I-132, GENOTROPIN 36 IU (5.3mg), Somatropin 36IU / 1Cartridge, Powder for Inionion
I-133, i-HALDOL 0.5, iHaloperidol 0.5mg, iitheyibhile
I-134, HALDOL 2mg / ml, iHaloperidol 2mg / ml, Drops
I-135, i-HALDOL 5, iHaloperidol 5mg, iitheyibhile
I-136, HALDOL 5mg / ml, iHaloperidol 5mg / ml, In sindion
I-137, i-HALDOL Decanoas, iHaloperidol 50mg / ml, ithumba
I-138, i-HALDOL Decanoas, iHaloperidol 100mg / ml, ithumba
I-139, HEMINEVRIN, Chlormethiazole 300mg, Miglyol (812) 125mg, iikhowudi
I-140, IMUKIN 100mcg / 0.5ml, Ukuphindaphindeka kwe-Human Interferon-gamma 6000000 IU / ml, In sindion *
I-141, INSIDON 50, Opipramol 50mg, Iitheyibhile
I-142, i-INTARD, iDiphenoxylate HCl 2.5mg, Atropine sulphate 0.025mg, iitheyibhile
I-143, i-INTRAVAL, iTiyopentone Sodium 0.5g / 1vial, Injection
I-144, IXEL 25mg, iMilnacipran 25mg / ithumba, Iicaphule
I-145, IXEL 50mg, iMilnacipran 505mg / ithumba, Iicaphule
I-146, KAFOSED, Dextromethorphan HBr 15mg / 5ml, Syrup
I-147, KEMADRIN 10mg / 2ml, Procyclidine HCL 10mg / 2ml, In sindion
I-148, KEMADRIN 5mg, Procyclidine HCL 5mg, Amacwecwe
I-149, KETALAR 10, Ketamine HCL 10mg / ml, Injection
I-150, KETALAR 50, Ketamine HCL 50mg / ml, Injection
I-151, KLIOGEST, Oestradiol 2mg, Norethisterone 1mg, Amacwecwe
I-152, i-LAGAFLEX, iCarisoprodol 300 mg, iParacetamol 250mg, iitheyibhile
I-153, LARGACTIL, Chlorpromazine HCL 25mg / 5ml, Syrup
I-154, I-XARUME ye-10, i-Chlorpromazine HCL 10mg, Amacwecwe
I-155, I-XARUME ye-100, i-Chlorpromazine HCL 100mg, Amacwecwe
I-156, I-XARUME ye-25, i-Chlorpromazine HCL 25mg, Amacwecwe
I-157, LARGACTIL 25mg / ml, Chlorpromazine HCL 25mg / ml, In sindion
I-158, I-XARUME ye-50, i-Chlorpromazine HCL 50mg, Amacwecwe
I-159, LARGACTIL 50mg / 2ml, Chlorpromazine HCL 50mg / 2ml, Injection
I-160, LARGACTIL100, Chlorpromazine HCL 100mg, Suppo.
I-161, LEXOTANIL 1.5, Bromazepam 1.5 mg, Amacwecwe
I-162, LEXOTANIL 3, Bromazepam 3 mg, Amacwecwe
I-163, LEXOTANIL 6, Bromazepam 6 mg, Amacwecwe
I-164, i-LimBITROL, i-Amitriptyline 12.5 mg, iChlordiazepoxide 5 mg, iicaps
I-165, I-XIUMX ye-LIORESAL, i-Baclofen 10 mg, Amacwecwe
I-166, I-XIUMX ye-LIORESAL, i-Baclofen 25 mg, Amacwecwe
I-167, i-LOMOTIL, iDiphenoxylate HCl 2.5mg, Atropine sulphate 0.025mg, Amacwecwe
I-168, ILUDIOMIL 10, iMaprotiline HCL 10mg, Amacwecwe
I-169, ILUDIOMIL 25, iMaprotiline HCL 25mg, Amacwecwe
I-170, ILUDIOMIL 50, iMaprotiline HCL 50mg, Amacwecwe
I-171, ILUDIOMIL 75, iMaprotiline HCL 75mg, Amacwecwe
I-172, I-MELLERIL 0.5%, i-Thioridazine HCL 0.5%, iSusp.
I-173, I-MELLERIL 10, i-Thioridazine HCL 10mg, Amacwecwe
I-174, I-MELLERIL 100, i-Thioridazine HCL 100mg, Amacwecwe
I-175, I-MELLERIL 25, i-Thioridazine HCL 25mg, Amacwecwe
I-176, I-MELLERIL 50, i-Thioridazine HCL 50mg, Amacwecwe
I-177, MENOGON 75IU, Menotrophin HMG 75IU / 1Ampoule, Injection
I-178, MUSCADOL, Orphenadrine citrate 35mg, Paracetamol 450mg, Amacwecwe
I-179, i-MYOGESIC, i-Orphenadrine 35mg, iParacetamol 450mg, iitheyibhile
I-180, NEOTIGASON 10, Acitretin 10 mg, iikhompyuter
I-181, NEOTIGASON 25, Acitretin 25 mg, iikhompyuter
I-182, NOBRIUM 10, iMedazepam 10mg, iikhowudi
I-183, NOBRIUM 5, iMedazepam 5mg, iikhowudi
I-184, i-NOCTRAN 10, i-Clorazepate dipotassium 10mg, i-Acepromazine eyindoda i-1.016mg, i-Aceprometazine eyindoda i-10.16mg, iitheyibhile
I-185, i-NORACOD, i-Codeine 10mg, iParacetamol 500mg, iitheyibhile
I-186, I-NORCURON 10mg, i-Vecuronium Bromide 10mg / ampoule, Umgubo wesitofu
I-187, I-NORCURON 4mg, i-Vecuronium Bromide 4.0mg / ampoule, Umgubo wesitofu
I-188, NORDITROPIN 12IU, Somatropine 12 IU, Injection
I-189, NORDITROPIN 4IU, Somatropine 4 IU, Injection
I-190, NORDITROPIN Iiseti zePen 12, Somatropine 12 IU, Injection S / C
I-191, NORDITROPIN Iiseti zePen 24, Somatropine 24 IU, Injection S / C
I-192, iNorditropin SimpleXx
I-10mg / 1.5ml, iSomatropin, Inj /
I-193, iNorditropin SimpleXx
I-15mg / 1.5 ml, iSomatropin, Inj /
I-194, iNorditropin SimpleXx
I-5mg / 1.5 ml, iSomatropin, Inj /
I-195, Norditropin Nordilet
I-5mg / 1.5 ml, i-Somatropin, i-Inj kwipeni egcwalisiweyo
I-196, Norditropin Nordilet
I-10mg / 1.5 ml, iSomatropin, Inj. kwipeni egcwalisiweyo
I-197, Norditropin Nordilet
I-15mg / 1.5 ml, iSomatropin, Inj. kwipeni egcwalisiweyo
I-198, i-NORFLEX, i-Orphenadrine citrate ye-30mg / ml, ithumba
I-199, I-NORFLEX 100, i-Orphenadrine citrate 100mg, Iitheyibhile
I-200, i-NORGESIC, i-Orphenadrine citrate ye-35mg Paracetamol 450mg, Iitheyibhile
I-201, NUBAIN 10mg / ml, i-Nalbuphine HCL 10mg / ml, In sindion
I-202, NUBAIN 20mg / ml, i-Nalbuphine HCL 20mg / ml, In sindion
I-203, i-Nuvaring, i-Etonogestrel kunye ne-Ethinylestradiol, iRingi yeVaginal
I-204, i-ORAP, i-Pimozide 1mg, iitheyibhile
I-205, i-ORAP Forte, i-Pimozide 4mg, iitheyibhile
I-206, i-OXETINE, iFluoxetine Hydrochloride 20mg, Amacwecwe
I-207, PARACODOL, Codeine phosphate 8mg, Paracetamol 500mg, Eff.Tab.
I-208, PARACODOL, Codeine phosphate 8mg, Paracetamol 500mg, Iitheyibhile
I-209, i-PHENSEDYL, i-Codeine phosphate 8.9mg Promethazine HCL 3.6mg Ephedrine HCL 7.2mg / 5ml, Linctus
I-210, i-PHYSEPTONE, iMethadone HCL 10mg / ml, ithumba
I-211, i-PHYSEPTONE 5, iMethadone HCL 5mg, iitheyibhile
I-212, PREPULSID, Cisapride 1mg / ml, Ukumiswa
I-213, PREPULSID, Cisapride 30mg, Prov.
I-214, PREPULSID 10mg, Cisapride 10mg, Amacwecwe
I-215, PREPULSID 5mg, Cisapride 5mg, Amacwecwe
I-216, i-PRIMOTESTONE idepho i-100mg, iTestosterone Enanthate 110mg, iTestosterone Propionate 25mg, = iTestosterone 100mg / ml, In sindion
I-217, i-PRIMOTESTONE idepho ye-250mg, iTestosterone en enisa i250mg / 1ml,
I-218, i-PROGYLUTON, i-Estradiol Valerate 2mg / 11white tab. I-Estradiol Valerate 2mg kunye neNorgestrol 0.5mg / 10 ithebhu ye-imeyile.
I-219, PROKINATE, Cisapride 5mg / 5ml, Ukumiswa
I-220, PROKINATE 10mg, Cisapride 10mg, Amacwecwe
I-221, PROKINATE 5mg, Cisapride 5mg, Amacwecwe
I-222, PROLIXIN 25mg / ml, Fluphenazine decanoate 25mg / ml, In sindion
I-223, PROPESS, iProstaglandin i-E2 10mg / ipessary, iipessaries zeVaginal
I-224, I-ProTHIADEN 25, iDothiepin HCl 25mg, iicaps
I-225, I-ProTHIADEN 75, Dothiepin HCl 75mg, Amacwecwe
I-226, PROVIRON, Mesterolone 25mg, iitafile
I-227, i-ProZAC, iFluoxetine 20mg, iitheyibhile
I-228, PROZAC, Fluoxetine 20mg / 5ml, I-Liquid
I-229, i-ProZAC ngeveki i-90mg, iFluoxetine (njengoko uF. Hydrochloride) 90mg / ikhaphetshu,
I-230, I-REDUCTIL 10mg, iSibutramine Hydrochloride Monohydarte 10mg, iikhowudi
I-231, I-REDUCTIL 15mg, iSibutramine Hydrochloride Monohydarte 15mg, iikhowudi
I-232, REMERON 15 mg, Mirtazapine 15mg, Amacwecwe
I-233, REMERON 30 mg, Mirtazapine 30mg, Amacwecwe
I-234, REMERON 45 mg, Mirtazapine 45mg, Amacwecwe
I-235, i-Remeron Sol Tab 30mg, iMirtazapine, iitafile
I-236, i-REVACOD, i-Codeine Phosphate 10mg, ithebhu yeParacetamol 500mg / 1., Amacwecwe.
I-237, RHINOTUSSAL, Dextromethorphan HBr 20mg Phenylephrine HCL 20mg, Carbinoxamine maleate 4mg, Capsules
I-238, I-RIAPHAN 15mg / 5ml, i-Dextromethorphan HBr 15mg / 5ml, Syrup
I-239, RISPERDAL 1, Risperidone 1mg, Iitheyibhile
I-240, RISPERDAL 1mg / ml, Risperidone 1mg / 1ml, Isisombululo somlomo
I-241, RISPERDAL 2, Risperidone 2mg, Iitheyibhile
I-242, RISPERDAL 3, Risperidone 3mg, Iitheyibhile
I-243, RISPERDAL 4, Risperidone 4mg, Iitheyibhile
I-244, iRisperidal Consta 25mg, iRisperidone, Inj / Ukumiswa
I-245, iRisperidal Consta 37.5 mg, iRisperidone, Inj / Ukumiswa
I-246, iRisperidal Consta 50 mg, iRisperidone, Inj / Ukumiswa
I-247, RITALIN 10, Methylphenidate HCL 10mg, Amacwecwe
I-248, RITALIN SR 20mg, Methylphenidate HCL 20mg / 1tab., Amacwecwe
I-249, i-RIVOTRIL 0.25%, i-Clonazepam 0.25%, i-Drops
I-250, RIVOTRIL 0.5, Clonazepam 0.5 mg, Amacwecwe
I-251, RIVOTRIL 1mg / ml, Clonazepam 1mg / ml, In sindion
I-252, i-RIVOTRIL 2, iClinazepam 2mg, Amacwecwe
I-253, ROACCUTANE 10, Isotretinoin 10mg, Iicaphule
I-254, ROACCUTANE 2.5, Isotretinoin 2.5mg, Iicaphule
I-255, ROACCUTANE 20, Isotretinoin 20mg, Iicaphule
I-256, ROACCUTANE 5, Isotretinoin 5mg, Iicaphule
I-257, i-ROBAXIN, iMethocarbamol 100mg / ml, ithumba
I-258, ROBAXIN 500, Methocarbamol 500mg, Amacwecwe
I-259, i-ROBAXISAL, Methocarbamol 400mg, Aspirin 325mg, Iitheyibhile
I-260, i-ROBITUSSIN-CF, i-Dextromethorphan HBr 10mg, iGuaifenesin 100mg, I-Pseudoephedrine HCl 30mg / 5ml, Syrup
I-261, I-ROMILAR 1.5%, i-Dextromethorphan 15mg / ml, Drops
I-262, iROMILAR 15, iDextromethorphan 15mg, iiDragees
I-263, YOKUQWALASELULA I-ROMILAR, I-Dextromethorphan 3.06mg, i-Ammonium chloride 18mg, iPanthenol 11mg / 1ml, Syrup
I-264, I-SAIZEN 4 IU, i-Somatropine 4 IU, Injection
I-265, SALIPAX, Fluoxetine 20mg, iikhowudi
I-266, SANDOSTATIN 0.05, i-Octreotide 0.05mg / ml, ithumba
I-267, SANDOSTATIN 0.1, i-Octreotide 0.1mg / ml, ithumba
I-268, SANDOSTATIN 0.2, i-Octreotide 0.2mg / ml, ithumba
I-269, SANDOSTATIN 0.5, i-Octreotide 0.5mg / ml, ithumba
I-270, I-SAROTEN ibuyise i-25, i-Amitriptyline HCL 25 mg, iikhowudi
I-271, I-SAROTEN ibuyise i-50, i-Amitriptyline HCL 50 mg, iikhowudi
I-272, I-SEDOFAN DM, i-Dextromethorphan HBr 10mg I-Triprolidine 1.25mg, I-Pseudoephedrine HCL 30mg / 5ml, iSyrup
I-273, SEDOFAN-P, Dextromethorphan HBr 15mg, Amacwecwe
I-274, I-SERENACE 0.5, iHaloperidol 0.5mg, iitheyibhile
I-275, I-SERENACE 1.5, iHaloperidol 1.5mg, iitheyibhile
I-276, I-SERENACE 10, iHaloperidol 10mg, iitheyibhile
I-277, I-SERENACE 5, iHaloperidol 5mg, iitheyibhile
I-278, i-SEROQUEL 100 mg, iQuetiapine 100 mg, Amacwecwe
I-279, i-SEROQUEL 200 mg, iQuetiapine 200 mg, Amacwecwe
I-280, i-SEROQUEL 25 mg, iQuetiapine 25 mg, Amacwecwe
I-281, i-SEROQUEL isiguli somqali wesigulana, iQuetiapine 100 mg / ithebhu. (Amacwecwe e-2), iQuetiapine 25 mg / ithebhu. (Amacwecwe e-6), Amacwecwe
I-282, i-SEROXAT 20, iParoxetine 20mg, iitheyibhile
I-283, i-SERZONE 100mg, Nefazodone HCL 100mg, Amacwecwe
I-284, i-SERZONE 150mg, Nefazodone HCL 150mg, Amacwecwe
I-285, i-SERZONE 200mg, Nefazodone HCL 200mg, Amacwecwe
I-286, i-SERZONE 250mg, Nefazodone HCL 250mg, Amacwecwe
I-287, i-SERZONE 50mg, Nefazodone HCL 50mg, Amacwecwe
I-288, SIRDALUD 2, Tizanidine 2mg, Amacwecwe
I-289, SIRDALUD 4, Tizanidine 4mg, Amacwecwe
I-290, i-SOMADRYL, i-Carisoprodol 200mg Paracetamol 160mg, Caffeine 32mg, Amacwecwe
I-291, SONATA 10mg, Zaleplon 10mg / 1capsule, Iicaphule
I-292, SONATA 5mg, Zaleplon 5mg / 1capsule, Iicaphule
I-293, SOSEGON 50mg, iPentazocine HCL 56.4mg, Amacwecwe
I-294, ST.JOSEPH ukukhohlela, i-Dextromethorphan HBr 0.1179% w / w, Syrup
I-295, STADOL 1mg / ml, iButorphanol tartrate 1mg / ml, In sindion
I-296, STADOL 2mg / ml, iButorphanol tartrate 2mg / ml, In sindion
I-297, STADOL 4mg / 2ml, i-Butorphanol tartrate 4mg / 2ml, In sindion
I-298, STELAZINE 1, iTrifluoperazine 1mg, Amacwecwe
I-299, STELAZINE 10, iTrifluoperazine 10mg, iicaps
I-300, STELAZINE 15, iTrifluoperazine 15mg, iSpansule
I-301, STELAZINE 2, iTrifluoperazine 2mg, iSpansule
I-302, STELAZINE 5, iTrifluoperazine 5mg, Amacwecwe
I-303, STEMETIL, Prochlorperazine eyindoda 0.1% w / v, Syrup
I-304, STEMETIL, Prochlorperazine eyindoda i-25mg, iitheyibhile
I-305, STEMETIL, Prochlorperazine eyindoda i-5mg, iitheyibhile
I-306, STEMETIL, Prochlorperazine maleate12.5mg / ml, ithumba
I-307, STEMETIL, Prochlorperazine eyindoda 25mg / 2ml, Injection
I-308, STERANDRYL RETARD 250mg, Testosterone Hexahydrobenzoate 125mg, Trans-hexahydroterephtalate ye-n-butyl kunye ne-testosterone 125mg / ampoule, Injection
I-309, STESOLID, Diazepam 0.4mg / ml, iSyrup
I-310, STESOLID, i-Diazepam 2mg, iitheyibhile
I-311, STESOLID, i-Diazepam 5mg, iitheyibhile
I-312, STESOLID, I-Diazepam 5mg / ml, In sindion
I-313, STESOLID, Diazepam 5mg / 2.5ml, isisombululo
I-314, STESOLID, Diazepam 10mg / 2.5ml, isisombululo
I-315, STILNOX 10mg, iZolpidem Tartrate 10mg / 1 ithebhu.
I-316, STIVANE 300, I-Pyrisuccideanol dimaleate 300mg, iikhowudi
I-317, SUBUTEX 2mg, Buprenorphine HCL 2mg / 1tab., Amacwecwe
I-318, SUBUTEX 8mg, Buprenorphine HCL 8mg / 1tab., Amacwecwe
I-319, SURMONTIL 25, i-Trimipramine eyindoda i-35mg, iitheyibhile
I-320, SURMONTIL 50, i-Trimipramine eyindoda i-69.75mg, iikhowudi
I-321, SUSTANON 250mg, iTestosterone Propionate 30mg, iTestosterone Phenylpropionate 60mg, iTestosterone isocaproate 60mg, i-testosterone decanoate 100mg, In sindion
I-322, TEKAM 10, Ketamine HCL 10mg / ml, Injection
I-323, TEKAM 50, Ketamine HCL 50mg / ml, Injection
I-324, TEMGESIC 0.3mg / ml, Buprenorphine HCL 0.3 mg / ml, In sindion
I-325, TEMGESIC 0.6mg / 2ml, Buprenorphine HCL 0.6mg / 2ml, Injection
I-326, TEMGESIC Sublingual, Buprenorphine HCL 0.2 mg, Amacwecwe
I-327, I-TIAPRIDAL 100, iTiapride 100mg, iitheyibhile
I-328, TIAPRIDAL 100mg / 2ml, iTiapride 100mg / 2ml, In sindion
I-329, TICLID, Ticlopidine 250mg, Amacwecwe
I-330, TIXYLIX, Pholcodine 1.5mg Promethazine HCL 1.5mg / 5ml, Linctus
I-331, TOFRANIL 10, Imipramine 10mg, Amacwecwe
I-332, TOFRANIL 25, Imipramine 25mg, Amacwecwe
I-333, iXRAM 100mg, iTramadol 100mg, Supp.
I-334, iXRAM 100mg / 2ml, iTramadol 100mg / 2ml, In injion
I-335, iXRAM 100mg / ml, iTramadol 100mg / ml, Drops
I-336, iXRAM 50mg, iTramadol 50mg, iikhowudi
I-337, iXRAM 50mg / ml, iTramadol 50mg / ml, ithumba
I-338, iTRAMAL retard 100, iTramadol 100mg, iThebhulethi
I-339, INDLELA YOKUXELENGA KWELOTRIS 100 mg, iTramadol 100mg, iitheyibhile
I-340, INDLELA YOKUXELENGA KWELOTRIS 150 mg, iTramadol 150mg, iThebhile
I-341, INDLELA YOKUXELENGA KWELOTRIS 200 mg, iTramadol 200mg, iThebhile
I-342, i-TRANXENE 10, i-Clorazepate dipotassium 10mg, iikhowudi
I-343, i-TRANXENE 5, i-Clorazepate dipotassium 5mg, iikhowudi
I-344, TREXAN 50, Naltrexone HCL 50mg, Amacwecwe
I-345, I-TRISEQUENS, i-Oestradiol 2mg (ithebhu eluhlaza), i-Oestradiol 2mg, i-Norethisterone acetate 1mg (ithebhu emhlophe), i-Oestradiol 1mg (ithebhu ebomvu), iitafile
I-346, I-TRISEQUENS i-forte, i-Oestradiol 4mg (ithebhu etyheli), i-Oestradiol 4mg, i-Norethisterone acetate 1mg (ithebhu emhlophe), i-Oestradiol 1mg (ithebhu ebomvu), iitafile
I-347, TRYPTIZOL 25, Amitriptyline HCL 25 mg, Amacwecwe
I-348, TUSCALMAN, Noscapine HCL 15mg, Aether Guaiacolglycerinatus 100mg / 10ml, Syrup
I-349, TUSSIFIN ene-codeine, i-Codeine phosphate 75mg Chlorpheniramine maleate 25mg, Glyceryl guaicolate 1gm, Sodium benzoate 3gm, Potasium citrate 3gm, Liquorice 7.5gm / 100ml
I-350, i-ULTIVA 1mg, i-Remifentanil 1mg / vial, Inaliti
I-351, i-ULTIVA 2mg, i-Remifentanil 2mg / vial, Inaliti
I-352, i-ULTIVA 5mg, i-Remifentanil 5mg / vial, Inaliti
I-353, i-UNMED DM, i-Triprolidine HCl 1.25 mg, i-Pseudoephedrine (HCl) 30mg, i-Dextromethorphan HBr 10 mg / 5ml, Syrup
I-354, VALIUM, Diazepam 2mg / 5ml, Syrup
I-355, VALIUM, Diazepam 10mg / 2ml, In injion
I-356, VALIUM 10, i-Diazepam 10mg, iitheyibhile
I-357, VALIUM 2, i-Diazepam 2mg, iitheyibhile
I-358, VALIUM 5, i-Diazepam 5mg, iitheyibhile
I-359, I-VECURONIUM ISIQINISEKISO SOKUGCINWA 10mg, Vecuronium Bromide 10mg / 1 vial, Powder for Inionion
I-360, I-VECURONIUM ISIQINISEKISO SOKUGCINWA 20mg, Vecuronium Bromide 20mg / 1 vial, Powder for Inionion
I-361, VESANOID 10mg, Tretinoin 10mg, Iikhowudi
I-362, VIRORMONE 10mg, iTestosterone Propionate 10mg, Injection
I-363, VIRORMONE 10mg, iTestosterone Propionate 10mg, Amacwecwe
I-364, VIRORMONE 25mg, iTestosterone Propionate 25mg, Amacwecwe
I-365, VIRORMONE 25mg, iTestosterone Propionate 25mg, Injection
I-366, i-XANAX 0.25, i-Alprazolam 0.25 mg, iitheyibhile
I-367, i-XANAX 0.5, i-Alprazolam 0.5 mg, iitheyibhile
I-368, i-XANAX 1, i-Alprazolam 1 mg, iitheyibhile
I-369, iZeldox 20mg / ml, iZiprasidone, Inj / Powder
I-370, i-ZOLOFT, iSertraline 50mg, iitheyibhile
I-371, ZYPREXA 10 mg, i-Olanzapine 10 mg, Amacwecwe
I-372, i-ZYPREXA 10 mg, i-Olanzapine 10 mg, In sindion
I-373, ZYPREXA 5 mg, i-Olanzapine 5 mg, Amacwecwe
I-374, ZYPREXA 7.5 mg, i-Olanzapine 7.5 mg, Amacwecwe
URHULUMENTE / WAMASEKELA
UMasipala wase Abu Dhabi IKhabrari yeKhabhinethi
Ajman Igumbi lezoRhwebo noShishino IKomishini yoCwangciso
UMasipala wase Abu Dhabi Icandelo loMphathiswa Wezolimo
Ukhuseleko lweDubai ISebe le-Atomic Energy
Dubai Igumbi lezoRhwebo noShishino Icandelo loMphathiswa Wezemichiza kunye nezichumisi
UMasipala waseDubai Icandelo loMphathiswa Wezithuthi Zaseburhulumenteni
I-Federal National Council Icandelo loMphathiswa wamalahle kunye neMayini
I-Federation ye-UAE Chambers of Commerce Nemveliso Icandelo loMphathiswa Wezorhwebo Nemizi-mveliso
Icandelo loMphathiswa Wezoqoqosho Norhwebo Icandelo loMphathiswa Wezonxibelelwano
Icandelo loMphathiswa Wezombane naManzi Icandelo loMphathiswa Wezemali
Icandelo loMphathiswa Wezempilo Icandelo loMphathiswa Wezemicimbi Yabathengi kunye Nokusasazwa Kwabantu
Icandelo loMphathiswa Wezangaphandle Icandelo loMphathiswa Wenkcubeko
Icandelo loMphathiswa Wezemfundo Nolutsha Icandelo loMphathiswa wokubulala iintsholongwane
Icandelo loMphathiswa Wezimali Nemizi-mveliso Icandelo loMphathiswa Wezendalo Namahlathi
Icandelo loMphathiswa Wezokucwangciswa Icandelo loMphathiswa Wezangaphandle
UMasipala waseSharjah Icandelo loMphathiswa Wezimali
USharjah Chamber wezoRhwebo naMashishini Icandelo loMphathiswa Wezolimo
URhulumente we-UAE Icandelo loMphathiswa Wezempilo Noluntu
Amakhonkco oqoqosho e-UAE kwezoqoqosho, ezopolitiko nawenkcubeko ne-India, asusela kwiminyaka engaphezulu kwekhulu eyadlulayo, aqolile kwaye aneempawu ezahlukeneyo. Urhwebo lwentengiso belukhula ngokuthe ngcembe kwiminyaka edlulileyo kwaye unxibelelwano lwabantu-kubantu luhlala lusanda. Abakhenkethi abavela kumacala omabini bayandwendwela ukonwaba kunye nokonwaba, kwaye ngakumbi nangakumbi ilizwe lase-UAE lifumaneka kumaziko ezempilo nakwezokhenketho eIndiya.
Ukusondelelana phakathi kwabemi baseIndiya kunye nabemi banokugwetywa ngenxa yokuba uluntu lwaseIndiya lolona luntu lukhulu lwangaphandle e-UAE, lubalwa malunga nesigidi se1.5. Umxokelelwane omeleleyo wobuhlobo phakathi kwe-UAE ne-India ulungele ukuhlukaniswa ngakumbi kwaye uqiniswe kwiinyanga nakwiminyaka ezayo.
Amagqabantshintshi odliwanondlebe kunye ne-Ambassia yase-India kwi-UAE Talmiz Ahmed.
Ubudlelwane phakathi kwe-UAE ne-India bomelele kwaye busekwe kunxibelelwano lwenkcubeko phakathi kwabantu bala mazwe mabini. Ngawaphi amaqhina ezimbali abopha ezi ntlanga zimbini kwaye zeziphi iindlela zokuqinisa ubudlelwane bawo bezenkcubeko kunye nezendabuko?
Ubudlelwane baseIndiya-e-UAE busekweni. La mazwe mabini abelana ngebhanti yobudlelwane benkcubeko kwaye unxibelelwano olomeleleyo lwezorhwebo nenkcubeko. Ukuqinisa ubudlelwane bethu kugubungela uluhlu olupheleleyo lwezoqoqosho, ezobugcisa, zentlalo kunye neenkcubeko eziluncedo kuluntu luphela.
Umzuzu kubudlelwane obukhulayo be-Indiya kunye namazwe e-Gulf, ngakumbi i-UAE, kubonelelwe ngotyelelo luka-Mphathiswa Wezangaphandle uShaikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan e-India ngoJuni. Ngexesha lotyelelo, omabini amacala aba neengxoxo kunye neziqhamo ezinemveliso kwizifundo ezininzi ezahlukeneyo, kubandakanya ubudlelwane phakathi kwamazwe amabini, imeko yommandla, ukhuseleko, ukhuselo kunye namandla ahlaziyekayo. Ukusuka kwicala laseIndiya, ngeloxesha wayengu-Mphathiswa Wezangaphandle, uPranab Mukherjee kunye noMphathiswa wezoRhwebo noShishino uKamal Nath babehambele i-UAE ngoMeyi nango-Epreli 2008, ngokulandelelana.
Ubudlelwane bethu abumiswanga ngorhwebo kunye nemiba yezoqoqosho kuphela. AmaIndiya ayekhona kwi-UAE kwakude kudala ngaphambi kokuba ifumaneke ioyile kwaye adlale indima ebalulekileyo kuphuhliso lwelizwe. Bangamaqabane asebenzayo kunye neenkosi zabo ze-Emirati. Iinkokheli ze-UAE ziye izihlandlo ezininzi zalivuma igalelo elenziwa ngamaIndiya kwimigangatho eyahlukeneyo.
Zithini izinto ezikhoyo kwinkqubela yamashishini nezorhwebo phakathi kwala mazwe mabini?
I-Indiya ne-UAE zenza iinzame zokuvuselela kunye nokomeleza ubudlelwane kwezoqoqosho kunye nobudlelwane kwezorhwebo. Ubudlelwane phakathi kwala mazwe mabini buye bavela kwintsebenziswano ebalulekileyo kwinqanaba lezoqoqosho kunye nezorhwebo, ne-UAE evelayo njengemarike yesibini ngobukhulu kwihlabathi jikelele kwiimveliso zaseIndiya. Kwangelo xesha, amaIndiya avele njengabatyali-mali ababalulekileyo kwi-UAE, kunye neIndiya njengendawo ebalulekileyo yokuthumela ngaphandle ye-UAE yeempahla ezenziwe.
Lwalunjani urhwebo lwendlela ezimbini phakathi kwala mazwe mabini kulo nyaka uphelileyo? I-India-UAE yokuthengisa ngaphandle kweoyile enexabiso kwi- $ 29,023.68 kwi2007-2008. Ukurhweba ngeendlela ezimbini ze-2007-2008 kubonise ukukhula kwe-40 pesenti ngaphezulu konyaka odlulileyo. Izinto eziphambili zokuthumela ngaphandle zivela eIndiya zibandakanya i-oyile yamaminerali, iiperile zendalo okanye ezigcadiweyo, iicereale, iigrem kunye nobucwebecwebe, ilaphu yomntu, amalaphu, iintsimbi, umsonto wekotoni, iimveliso zaselwandle, oomatshini kunye nezixhobo, iiplasitiki kunye neemveliso zewinleum, iti kunye nenyama kunye namalungiselelo. Izinto ezinkulu zokungenisa izinto ezivela e-UAE zibandakanya i-oyile yezimbiwa, ioyile yeminerali, iiparele zendalo okanye ezigcadiweyo, amatye anqabileyo okanye anqabileyo-okona, ii-ores zensimbi kunye nesikhafu sesinyithi, isalfure kunye neeprites zentsimbi ezingafakwanga izixhobo, oomatshini zombane kunye nezixhobo kunye neenxalenye zawo, i-iron kunye neentsimbi njl.
Inxalenye enkulu yokuthunyelwa kwelinye ilizwe eIndiya iye e-UAE idluliselwa kwamanye amazwe kwingingqi efana nePakistan, Afghanistan, Iran, Iraq, Saudi Arabia, Yemen kunye, nasemva kwexesha, nkqu ukuya kumazwe ase-Mpuma Afrika. Ke ngoko, ukuthunyelwa kwelinye ilizwe kwi-UAE, kuye kwavula imarike enkulu yemveliso kwiimveliso zaseIndiya.
Ngaba ukhona umda wokukhula ngakumbi kurhwebo lwamazwe amabini kunye notyalo-mali olufanayo phakathi kwala mazwe mabini?
Ukonyuka okuthe kratya kworhwebo lwethu lwabini, ngakumbi kwicandelo elingelilo ioyile, kubonisa ukukhula kunye nobunzulu boqoqosho ezimbini. Iinkampani zaseIndiya kunye ne-UAE zibandakanyeka ngokuzinzileyo ekuqhubeleni phambili utyalomali kunye neeprojekthi kuwo omabini amazwe. La manyathelo edibeneyo lentsebenzo abandakanya ezinye zeenkampani ezibaluleke kakhulu ezivela eIndiya ezinje ngeTata, ukuThembela, iWipro, i-NTPC, iLarsen & Toubro, iDodsals kunye nePunj Lloyd. Ukusuka kwicala le-Emirati, iinkampani eziphezulu e-India zi-Emaar, Nakheel, DP World, njl. Ngo-Okthobha wonyaka ophelileyo, i-MoU phakathi kweYunivesithi i-UAE kunye ne-India yase-India ya-Atul yatyikitywa ngenjongo yobambiswano lobuchule bokuhambisa itekhnoloji ukuseka ilizwe- yomhla weyunithi yezenkcubeko yokuvelisa izicubu zesundu eRajasthan.
Leliphi inani eliqikelelweyo labantu baseIndiya kunye namashishini e-UAE?
Kuqikelelwa ukuba malunga ne-1.5 yezigidi zamaIndiya ahlala e-UAE. Akunabaninzi abaye bashiya ilizwe kwixesha elidlulileyo. Ingxaki yehlabathi lonke isebenze nje ukuqinisa utshintsho kude nomsebenzi oqikelelwayo ngaphandle kokuba nefuthe elibi kumbane wamandla, iziseko zophuhliso kunye neeprojekthi zorhwebo kweli lizwe, ngakumbi eDubai nase Abu Dhabi, njengoko imali ifumaneka ngokulula iiprojekthi ezinxulumene nophuhliso lwesizwe. Yiyo loo nto imeko yezoqoqosho ikhoyo ngoku kungalindelekanga ukuba ibe nayiphi na impembelelo ebonakalayo ekufuneni abantu baseIndiya.
Injani imeko yokhenketho phakathi kwala mazwe mabini?
Icandelo lezokhenketho yenye yeendawo ezinamandla amahle okukhula okuzayo, ngakumbi ukhenketho kwezonyango. I-Emiratis eya e-India sele isebenzisa iinkonzo zempilo zaseIndiya, kubandakanya ukwamkelwa kwe-ayurvedic kunye ne-spas. Enye indawo enomda omkhulu wokusebenzisana kukhenketho kukwakha nokulungisa iihotele. Kukho indawo elungileyo ye-UAE yokutyala imali kwicandelo lonke lezokhenketho eIndiya, eliza kunceda ukutsala abakhenkethi abatyelele i-UAE ukuya eIndiya.
Ngaba kuya kubakho isigaba esitsha, esinamandla ngakumbi, kubudlelwane be-UAE-e-India kwikamva?
Ukubonisa ubunyani behlabathi, ubudlelwane phakathi kweIndiya ne-UAE bafumana umda omtsha. La mazwe mabini aseke ubudlelwane obuqinileyo kwicandelo lezorhwebo nezorhwebo. Obu budlelwane buyanda, buphinda-phinda kwaye buye kubambiswano lobuchule kugxininiso kwintsebenziswano kwezokhuseleko, amandla, njl njl. I-UAE njengommelwane iya kunikwa ingqalelo ephambili ekuphuculeni ubudlelwane bethu.
Omabini la mazwe angabambisana ngokubambisana nangokuchaseneyo kwimicimbi yezokhuselo nokhuseleko kwaye abe ngamahlakani kumlo wehlabathi wokulwa nobunqolobi nokuzibaxa izinto.
Kuba i-UAE ijonge kumashishini asekwe kulwazi kunye neIndiya evelayo njengeenkokeli zehlabathi esikhaleni, ezolimo, amayeza kunye ne-biyo-teknoloji, kukho indawo enkulu yokusebenzisana ekudluliseleni itekhnoloji, iR & D nakwindlela edibeneyo. Ukusebenzisana kwezomkhosi kufikelele kwinqanaba elitsha ngomzimba wokuqala we-India-UAE kunye nomhlangano wesibini weIndiya-UAE. I-India yafumana inkxaso eqinileyo ye-UAE kwicala lomcimbi wobunqolobi, ngokukodwa ukuhlaselwa kwe-Microsoft ngo-Novemba odlulileyo.
Amakhonkco okuthengisa phakathi kweIndiya ne-UAE sele ekho. Ukukhula kwe-Indo-UAE ubudlelwane kwezoqoqosho nakwezorhwebo kufaka isandla kuzinzo oluxabisekileyo kunye namandla kubuhlobo obumbini phakathi kwala mazwe mabini. I-UAE inokonwabela ubudlelwane obanzi nobubanzi boqoqosho kunye ne-India, ngokusekelwe kwimidla yomtshato ophakathi.
Umthamo wangoku wezinto zorhwebo wamazwe amabini uxela ukuba eli lixesha elonwabisayo kwimbali yobudlelwane boqoqosho e-UAE-India. NgokukaRhulumente wase-India amanani i-UAE liqabane eliphambili lezorhwebo lase-India kunyaka-mali u-2008-09, ngaxeshanye amanani aseburhulumenteni e-UAE abonisa iIndiya njengeqabane labo eliphambili lokurhweba kwi2008.
Ngokwengxelo yaseburhulumenteni e-India, urhwebo phakathi kwamazwe ase-India â ukunyuka nge2008%. Ngokwezibalo zikarhulumente wase-UAE, kwi-2009 i-UAE - “ukurhweba kwamazwe amabini eIndiya inyuke nge-44.53 ipesenti ukusuka kwi-29.11 ukuya kufikelela kwi-USD 2007 yezigidigidi, accounting ye-2008 ipesenti yorhwebo lwangaphandle lwe-Emirates.
Ukuthunyelwa kwamaIndiya e-UAE ikakhulu kubandakanya igugu kunye nobucwebe, imifuno, iziqhamo, iziqholo, iimpahla zobunjineli, iti, inyama kunye namalungiselelo ayo, irayisi, amalaphu kunye nempahla kunye nemichiza. Ungeniso lwaseIndiya oluvela e-UAE ikakhulu lubandakanya ukungcola kunye neemveliso zepetroleum, igolide nesilivere, iiparele, amatye anqabileyo kunye ne-semiprecious, i-ores yensimbi kunye nesikhafu sesinyithi, iimpahla zombane kunye nezixhobo zothutho.
Utyalomali e-UAE e-Indiya kukwangqinwa kukhula okubonakalayo kwiminyaka yakutshanje. I-UAE ityale imali engaphezu kwe-USD 5 yezigidigidi e-India e-FDI (Utyalomali oluNgqalileyo lwaNgaphandle) kunye ne-FII (Abatyalali bamanye amazwe amaZiko) ezenza i-UAE ngomnye wabatyali mali abaphezulu e-India. Iinkampani eziphambili ze-UAE ezityalwe e-India zii-DP world, I-Emaar Group, i-Al Nakheel, i-ETA Star Group, I-SS Lootah Iqela, i-Emirates Techno Casting FZE, iGunya loTyalo-mali lwe-RAK, iDamas Jewelery kunye ne-Abu Dhabi Commerce Bank.
I-India ikwangumtyali-mali wesithathu ngobukhulu kwi-UAE. Iinkampani zaseIndiya ezinjengeL&T, Punj Lloyd, Hinduja Group, Cementer Cement, Iqela lehotele laseOberoi, baneeprojekthi ezinemisebenzi kwi-UAE. Ukulandela ukuvela kwe-UAE njengeziko eliphambili lokuthumela ngaphandle, iinkampani zaseIndiya ziye zavela njengabatyali-mali ababalulekileyo kwiindawo zentengiso zasimahla ezinjengeJebel Ali FTZ, iSikhululo senqwelomoya iSharjah, iHamariya Free Zones kunye ne-Abu Dhbai City City.
Isizathu esiphawulekileyo soqhina kwezoqoqosho oluqinileyo lwe-Indo-UAE yinto enkulu yokuphuma kwabantu baseIndiya e-UAE. Phantse i-2 yezigidi ze-Indiya ezigxothelwe ekhaya ngoku zihlala kwaye zisebenza e-UAE, ziquka ngaphezulu kwe-30 ipesenti yabemi belizwe kwaye zibumba iqela eliphambili labemi base-Emirates. Uluntu oluthunyelwe kwelinye ilizwe lunegalelo kuqoqosho lwaseIndiya. Izixa-mali ezihlawulwe ngokupheleleyo eIndiya ukusuka e-UAE kwi2008-09 zazimalunga ne-USD 10 -12 billion, ejikeleze isinye kwisithathu sayo yonke imbuyekezo evela kumazwe e-GCC ukuya eIndiya ejikeleze i-USD 32-25 yezigidigidi.
Unxibelelwano lomoya phakathi kwamazwe amabini
Kukho iindiza ze-475 ezingaphezu kweeveki ngeveki phakathi kokufika okwahlukileyo e-India nase-UAE, ekwabelwana ngayo yi-Emirates, i-Etihad, i-Air Arabia, iKingfisher, iJet Airways, i-Air India kunye ne-Air India Express. Kule nqwelo-moya ezintathu ze-UAE kuzwelonke (i-Emirates, i-Etihad kunye ne-Air Arabia) zisebenza malunga neenqwelomoya ze-304 ngeveki ezimele malunga ne-64% yeenqwelomoya ezenziwa kweli candelo.
I-Indiya kunye ne-United Arab Emirates ikwanayo neMvumelwano yeeNkonzo zoMoya (i-ASA). Esi siVumelwano sivumela amazwe omabini ukuba achonge naliphi na inani leenqwelo moya xa kuqhutywa iinkonzo zelizwe ekuvunyelwene ngazo ilizwe elinokuthi ligunyazise imvume kunye nemvume efanelekileyo.
Ezemfundo & Nophuhliso
Ukomeleza intsebenziswano phakathi kwamaziko emfundo e-UAE akhula ngobunono kunye neeyunivesithi zaseIndiya kunye namaziko ophando aphezulu. Ukukhuthaza ukusebenzisana kwezenzululwazi, kubandakanywa kwiindawo ezinamandla avuselelekayo, uphuhliso oluzinzileyo, ezolimo ezomileyo, indalo yasentlango, uphuhliso lwasedolophini kunye nokunakekelwa kwezempilo okuphezulu.
USheikh Zared - iNkokeli yokuseka
Ukuphakama kwakhe uSheikh Zared bin Sultan Al Nahayan, umsunguli we-United Arab Emirates, wazalwa kwi-1918 e-Abu Dhabi. Wayengoyena mncinci kubantwana abane bakaSheikh Sultan bin Zayed, owayelawula u-Abu Dhabi kwi-1922 â ““ 1926. USheikh Zayed wafuduka nosapho lwakhe ukusuka e-Abu Dhabi waya e-Al Ain, apho wafumana khona imfundo yakhe yezenkolo kwaye wafunda imigaqo-siseko ye-Islam kwaye wafunda i-Holy Qurâ € ™ a. USheikh Zared wayekuthanda ukuxokisa kwaye wayekuthanda ukuzingela neminye imidlalo yemveli njengokukhwela kweenkamela kunye namahashe.
Kwi-1946, uSheikh Zared wonyulwa waba ngumlawuli kwingingqi ye-Mpuma ye-Abu Dhabi (Al Ain) kwaye ngela xesha le-20 awayichitha njengomlawuli weAl Ain, akazange asongele kwimizamo yokuphucula nokwenza iidolophana zale ndawo zibe zezala maxesha.
Kwi-1966, uSheikh Zared waba nguMlawuli wase-Abu Dhabi kwaye ngelixa esebenza ekuphuhliseni i-emirate, ukwakha izikolo, izibhedlele kunye neendlela, umbono wakhe wezopolitiko kunye nombono wakhe wexesha elizayo wajika ingqalelo yakhe ekwakheni umanyano kunye ne-emirates engummelwane weAraban Gulf. Wayengowokuqala ukubiza ukubizwa kwe-United Arab Emirates kwangoko emva kokuba iBritane ibhengeze ukuba iza kurhoxa kuloo mmandla. Nge-12 kaDisemba i-2 nd, i-1971, i-Sheikh Zared kunye nabalawuli bamazwe amathandathu angabamelwane ngokusemthethweni babhengeze i-United Arab Emirates kunye ne-Sheikh Zwede yenzeka.
Okoko yasekwa, uSheikh Zared wasebenza nabantakwabo, abalawuli beemirates, ekwenzeni ilizwe libe lilinye kwaye liliguqulele kwelinye lamazwe achumileyo kulo mmandla. Ngobulumko uliphathe kakuhle irhafu yengeniso yelizwe ukukhulisa umgangatho wokuphila wabemi kunye nabahlali be-UAE kwaye ubanike impilo engcono. Ubulumko buka-Sheikh Zwede bezopolitiko kunye nembono ezinengqiqo bezivakala ngaphakathi nangaphandle kwelizwe. Wafumana ukwamkelwa kunye nokuhlonitshwa okungafunekiyo kwingingqi nakwilizwe jikelele.
U-Sheikh Zared wasweleka ngo-Novemba we-2 nd 2004, kodwa uhlala ephila emhlabeni ukukhumbula iinkokheli ezinkulu kunye nasezintliziyweni nasezingqondweni zabantu bakhe kwizizukulwana ezizayo.
USheikh Khalifa Bin Zayed Bin Sultan Al Nahyan
I-United Arab Emirates ngurhulumente ozimeleyo, owasekwa kwi-1971. Imizamo yokusebenzisana kukarhulumente wayo yenziwa ngenjongo yokuphucula uqoqosho lwe-UAE kunye nenkqubela kuzo zonke iindawo nokubonelela ngobomi obuhle kubo bonke abemi base-UAE.
Ukuphakama kwakhe u-Sheikh Khalifa Bin Zayed Bin Sultan Al Nahyan wanyulwa njengo-Mongameli we-United Arab Emirates ngomhla we-3rd ka-Novemba, i-2004 emva kokudlula kukayise ongasekhoyo u-HH Sheikh Zayed Bin Sultan Al Nahyan, owayengumongameli wokuqala we-UAE .
Uxanduva loMongameli we-UAE
Intloko yebhunga eliphakamileyo nolawula iingxoxo zalo
Biza ibhunga eliphezulu ukuze libekho ezintlanganisweni kwaye ulibazise njengemigaqo yenkqubo evunywe libhunga kummiselo lwangaphakathi. Ibhunga kufuneka libizelwe ukuba libenentlanganiso ngalo lonke ixesha licelwa lelinye lamalungu alo.
Biza intlanganiso edibeneyo kunye nebhunga eliphezulu kunye ne-federal cabinet xa kunesidingo.
Sayina kwaye ukhuphe imithetho yomdibaniso, imithetho kunye nezigqibo ezigqitywe libhunga eliphakamileyo.
Tyala inkulumbuso, yamkele ukurhoxa, kwaye ishiye isikhundla sayo ngokuvunywa libhunga elongamileyo, yonyule usekela-yinkulumbuso kunye nabaphathiswa, yamkele ukurhoxa kwabo kwaye ibacele ukuba barhoxe kwizikhundla zabo ngokwesindululo senkulumbuso. umphathiswa.
Tyala abameli bozakuzaku bomanyano lwamazwe aphesheya kunye nabanye abaphetheyo, kunye nabezomkhosi ngaphandle komongameli kunye nejaji yenkundla ephakamileyo, bamkele ukurhoxa kwabo kwaye babacele ukuba barhoxe ekuvunyweni yikhabhathi. Ukuqeshwa, ukwamkelwa kokurhoxa emsebenzini okanye ukugxothwa kuya kwenziwa ngokwemigaqo kunye nokuhambelana nemithetho yemanyano.
Ukutyikitywa kweeleta zokugwetywa kwabameli bozakuzo be-Union ukuya kumazwe angaphandle nemibutho kunye nokwamkela iziqinisekiso zozakuzo kunye nabameli babameli bamanye amazwe kwi-Union kunye nokufumana iileta zabo zobungqina. Uya kuthi ngokunjalo asayine amaxwebhu okuqeshwa kunye nokuqinisekiswa kwabameli.
Yongamela ukwenziwa kwemithetho yomdibaniso, imimiselo kunye nezigqibo ngekharityhulamu yaseburhulumenteni kunye nabaphathiswa abanobuchule.
Vakalisa umanyano ngaphakathi elizweni kunye naphesheya nangaphandle kubo bonke ubudlelwane bamazwe.
Sebenzisa ilungelo lokuxolelwa okanye ukuncitshiswa kwesigwebo kwaye wamkele izigwebo zekomkhulu ngokuhambelana nomgaqo-siseko kunye nemithetho yemanyano.
Ukuhambisa umhombiso kunye neembasa zembeko, zombini ezomkhosi nezomkhosi, ngokuhambelana nemithetho enxulumene nokuhonjiswa kunye neembasa.
Nawaphi na amanye amandla aphathiswe kuye liBhunga eliPhakamileyo okanye aphathiswe igunya ngokuhambelana nalo Mgaqo-siseko okanye nemithetho yomanyano.
I-Biografi yokuPhakama kwakhe uSheikh Khalifa Bin Zayed Al Nahyan
Ukuphakama kwakhe u-Sheikh Khalifa Bin Zayed Al Nahyan ngumongameli wesibini we-United Arab Emirates, osungulo lwakhe lwabhengezwa kwi-2 nd kaDisemba, 1971. Ungumlawuli weshumi elinantandathu kummeli we-Abu Dhabi, lelona likhulu kumzabalazo ezisixhenxe owenza umanyano.
Ukuphakama kwakhe kwathatha igunya lomgaqo-siseko njengo-Mongameli we-UAE kwaye waba ngumlawuli we-Abu Dhabi kwi-3 rd kaNovemba we-2004, wangena ezihlangwini zikatata wakhe ongasekhoyo, u-Sheikh Zared Bin Sultan Al Nahyan osweleke kwi-2 nd kaNovemba we-2004.
Ukuphakama kwakhe wazalwa e-1948 kwingingqi esempuma ye-Abu Dhabi kwaye wafumana imfundo yakhe yamabanga aphantsi kwisixeko saseAl Ain, eyindawo yolawulo kulo mmandla. Ungunyana omkhulu kaShelem Zared Bin Sultan Al Nahyan ongunina kwaye umama wakhe nguHercy Sheikha Hissa Bint Mohammed Bin Khalifa Bin Zayed Al Nahyan.
Ubuphakamileyo bakhe bubuzwana besizwe saseBani Yas, ethathwa njengesizwe soomama bezona zizwe zininzi zama-Arabhu ezazihlala kule ndawo yaziwa ngokuba yi-United Arab Emirates. Esi sizwe sikhokele umanyano kwizizwe zama-Arabhu, ezazibizwa ngokuba yimbali yeBani Yas Allianceâ €.
Ukuphakama kwakhe kwalandela utata wakhe ongasekhoyo, u-Sheikh Zared Bin Sultan Al Nahyan kuwo onke amabakala obomi bakhe bonke. Isithuba sokuqala awasisebenzela sasiyabameli bommandla ongasempuma, kunye neentloko zamatyala phaya kwi-18 th ngoSeptemba, 1966. Esi sikhundla sasibaluleke kakhulu ebomini bakhe. Ngelixa ukuphakama kwakhe kwakuhlala kwisixeko saseAl Ain, wanikwa ithuba elihle lokunxibelelana nabemi beLizwe le-UAE yonke imihla, ukuba bazazi ngokupheleleyo iimeko zabo kwaye zichonge iminqweno kunye nethemba labo.
Ukuphakama kwakhe kwaqeshwa njengenkosana yenkosana ye-Abu Dhabi kwi-1 st kaFebruwari, 1969 kunye nentloko yesebe lezomkhosi. Ngenxa yesi sikhundla, uthathe ubunkokeli kumkhosi wokhuselo kwi-emirate kwaye wadlala indima ephambili kuphuhliso lwayo kunye nokuyijika kwiqela elincinci lezokhuselo libe liqela elisebenzayo elixhotywe ngezixhobo zala maxesha.
Kwi-1 st kaMeyi, i-1971, uPhakamileyo uSheikh Khalifa ubambe isikhundla se-ofisi yokuqala ye-khabin ye-Abu Dhabiâ € kwaye ithathe iipotifoliyo zokuzikhusela nezemali kule khabin.
Emva kokubhengezwa komdibaniselwano, Ukuphakama kwakhe kwathatha inxaxheba ukongeza kwimisebenzi yakhe yendawo yesikhundla sika-Mongameli wekhabinet ye-federal, eyasekwa ngoDisemba we-1973.
NgoFebruwari we1974, kwaye kulandela ukubhengezwa kwekhabhathi yendawo, Ukuphakama kwakhe waba ngumongameli wokuqala wesigqeba solawulo othathe isikhundla sekhabineli yeemirate kubandakanya nayo yonke imisebenzi yayo.
Ngexesha lolawulo lokuba ngumongameli webhunga elilawulayo, ukuphakama kwakhe kuye kwalawula kwaza kwalandela iiprojekthi zophuhliso zangqina kuwo onke amacandelo e-Abu Dhabi. Ngaphaya koko, ukuPhakama kwakhe kunike ingqalelo enkulu kuphuhliso kunye nokuphuculwa kweeprojekthi zeziseko zophuhliso kunye namaziko eenkonzo ezahlukeneyo. Uye wazama nokwakha izixhobo zala maxesha zolawulo, kunye nemigaqo yomthetho edityanisiweyo, njengoko oku kusisiseko esiqinileyo senkqubo yophuhliso lwentlalo noqoqosho.
Ukongeza kwimisebenzi yakhe njengo-Mongameli webhunga elilawulayo, Ukuphakama kwakhe wayephethe ukuseka kunye ne-ofisi kamongameli we-Abu Dhabi Investment Authority e-1976. Eli gunya lijongana nolawulo lotyalo-mali lweemanimali njengenxalenye yombono wesicwangciso sokuphuhliswa kwezixhobo zemali nokulondolozwa komthombo wemali ozinzileyo wesizukulwana esizayo.
Elinye lamanyathelo aphambili ophuhliso lwefuthe elinamandla lentlalontle elenziwe nguKuphakama kwakhe kukusekwa kweenkonzo zentlalo kunye nesebe lezorhwebo lwezakhiwo, elaziwa njenge â € œSheikh Khalifa Committeeâ €. Imisebenzi yesebe incedise kwimpumelelo yophuhliso lolwakhiwo kwi-Abu Dhabi.
Ukuphakama kwakhe kwakhona kuthathe isikhundla sesekela-mphathi-mikhosi omkhulu we-UAE Umkhosi oxhobileyo woorhulumente, apho athe wanikela ingqalelo ekhethekileyo kunye nokonyusa umdla kumkhosi oxhobileyo. Ngeli xesha lelo xesha, ukutsiba okukhulu kwenzeka kwinqanaba lokubonelela, uqeqesho kunye nokukwazi ukufumana ubuchwephesha bale mihla kunye nobuchwepheshe obuphambili azimisele ukubuphakamisa ukuwanika onke amacandelo amandla anjalo.
Igalelo elibalulekileyo lenziwa nguKuphakama kwakhe endaweni yokuqulunqa isiko lomkhosi, elisekwe kwimiqobo yomgaqo-nkqubo ophakamileyo welizwe. Lo mgaqo-nkqubo uphakamileyo usekwe ekusekweni kwendlela elungileyo, ukungangeneleli kwemicimbi yabanye nokuhlonitshwa kwezinjongo ezifanayo. Ngenxa yezi zinto, ukuphakama kwakhe akusindisanga nzame ekuqulunqweni komgaqo-nkqubo wokhuselo ogcina inkululeko, inkululeko kunye nomdla kurhulumente. Lo mgaqo-nkqubo unegalelo ekubekeni uMkhosi oxhobileyo wase-UAE kwisikhundla esiphambili esithe safumana imbeko yehlabathi liphela.
Emva kokuthatyathwa kokuPhakama kwakhe e-ofisini, isicwangciso sokuqala sobuchule sikarhulumente we-UAE samiliselwa phantsi kolawulo lwakhe. Ngapha koko, ukuPhakama kwakhe kwakhona kwaqalisa iphulo lokuphuhlisa amava egunya lowiso-mthetho ukuze kuguqulwe indlela yokunyula amalungu ebhunga likazwelonke ngendlela enokuthi idibanise unyulo kunye nokuqeshwa njengenyathelo lokuqala. Ngokwenza njalo, oku kuya kunika ekupheleni kosuku ithuba lokukhetha amalungu ebhunga ngonyulo ngqo.
Ukuphakama kwakhe kunomdla kwimidlalo yezemidlalo eyenziwa kwi-UAE, ngakumbi ibhola ekhatywayo. Uzabalazela ukubaxhasa ngezimali kwaye ahlonele amaqela ezemidlalo alapha ekhaya afumene impumelelo kunye neentshatsheli zalapha ekhaya, zommandla nezamazwe aphesheya.
Ukuphakama kwakhe uSheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum
Ukuphakama kwakhe uSheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum uthathe igunya lakhe lomgaqo-siseko njengo-Sekela Mongameli kunye ne-Nkulumbuso ye-UAE ngoJanuwari 5 th, i-2006 emva kokunyulwa kwamalungu eBhunga eliPhezulu le-Federal kunye nabalawuli be-Emirates. Ukusukela ukutyunjwa kwakhe, urhulumente wobumbano we-UAE uye wabona ubungqina bokukhawuleziswa kwezinga lokufezekiswa kunye nokukhula okukhulu kwenani lamanyathelo oorhulumente bamakhaya nabamazwe aphesheya ngokujonga ukuBona kwakhe kugxila ekutyalomali kwezixhobo zobumbano ngokufezekileyo nangokufanelekileyo .
Ngapha koko, ukuphakama kwakhe asungule isiCwangciso sokuqala sikaRhulumente we-Federal e-UAE ngo-Epreli 17 th, i-2007, ejolise ikakhulu ekufezekiseni uphuhliso oluzinzileyo kunye nokuzinza kwesizwe, ngelixa ibeka iliso ekusetyenzisweni kwamasebe karhulumente kwaye iqinisekisa ukuphendula ngendlela ebonakalayo ukulunga kwesizwe kunye nabemi.
Uxanduva lwe-Mongameli kaMongameli we-UAE
I-Mongameli kaMongameli wase-UAE wenza lonke uxanduva lomongameli we-UAE ekuhambeni kwexesha ngaso nasiphi na isizathu.
I-Biology yokuPhakama kwakhe uSheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum
NgoJanuwari 4th, i-2006, isikhundla sakhe esiphakamileyo u-Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum waba nguMlawuli wase-Dubai emva kokubulawa kuka-Sheikh Maktoum bin Rashid Al Maktoum.
Ukusukela ekubeni yi-Mongameli kunye ne-Nkulumbuso ye-UAE, kunye noMlawuli waseDubai, Amanyathelo okuqhekezwa komhlaba sele enziwe ngexabiso elimangalisayo.
Ngonyaka u-2007 wabona ubungqina obufezekisiweyo buka-Sheikh Mohammed kokubini nangommandla. Nge-Epreli 17th, i-2007, u-Sheikh Mohammed watyhila isiCwangciso seQhinga likaRhulumente we-UAE ngeenjongo zokufezekisa uphuhliso oluzinzileyo kwilizwe lonke, etyala imali kwimithombo yobumbano ngokukuko nangokuqinisekisa ukukhuthala, ukuphendula kunye nokubeka elubala kwimibutho yomdibaniso.
Injongo yesiseko kukuphakamisa ukukhula kwabantu ngokuthi batyale imali kwezemfundo kunye nophuhliso lolwazi kulo mmandla ngokuhlakulela iinkokeli ezizayo kuwo omabini amacandelo abucala nawoluntu, ukukhuthaza uphando lwezesayensi, ukusasaza ulwazi, ukukhuthaza ubunkokheli kwezoshishino, ukuxhobisa ulutsha, Inkcubeko, ukulondolozwa kwelifa lemveli nokukhuthaza amaqonga okuqonda phakathi kweenkcubeko ezahlukeneyo.
Ngawaphi amaxwebhu e-Kuwait? I-Visa ukuya eKuwait Uxwebhu oluvumela abemi basePolish ukuba bafudukele kwimimandla ye-Kuwait yivisa, enokufunyanwa kwi-ofisi yase-Kuwait e-Warsaw. Enye indlela yokufumana uxwebhu (okwexesha elingadlulanga kwiinyanga ze-3) kukuthenga kwisikhululo seenqwelomoya eKuwait, ngaphandle kwemigaqo eyongezelelweyo. Abaphethe i-visa yabakhenkethi ye-Kuwait banokuba ngababambisi bencwadana yokundwendwela esebenzayo ubuncinci iinyanga ze-6 ukusukela kumhla wokuhamba. Umrhumo we-visa yi-3 SD, ixabiso loshintsho olujikelezayo kwi-35-40 PLN. Kuwait yeyiphi imali oza kuyithatha? I-NZ Umbono ngaphesheya kwe-Nxweme ye-Nxweme yolwandle, ecwazimileyo kwilanga elijikeleze ilanga, ujikelezwe ngamanzi e-Persian Gulf, uhonjiswe ngeenqanawa kunye neenqanawa zokuhamba ngeenqanawa ubuyela kwizibuko, ngokuqinisekileyo ziya kukhunjulwa ixesha elide ngabo baya kuba ne ithuba lokuncoma le mbono ngamehlo abo. Ukongeza, uhambo oluya e-Kuwait lithuba elihle lokubona iZiko lezeNzululwazi, elona ndawo iphakamileyo emanzini e-Middle East, apho iintlobo zezidalwa zaselwandle ezihlala kwiArabia Gulf, kubandakanya ookrebe, zagxininiswa. Ukuze ubone zonke ezi zinto zinomdla ngamehlo akho, ngaphambi kokuba uhambe, kuya kufuneka ukhumbule impendulo kumbuzo "Yeyiphi imali eyiKuwait?" - imali ye-Kuwais iya kubonelela abahambi uhambo olunoxolo kunye olukhuselekileyo.